Mila Professional Madio Mpisolovava ao Shanghai, Shina. Tranonkala
LPA ny tena sehatry ny asa dia ny Fananana ny Lalàna
Shanghai no lehibe indrindra ao Shina tanàna sy ny foiben'ny varotra sy ny fitantanam-bola. Lalàna Hentitra ny topy maso McDermott Dia Emery no stratejika mifanaraka amin'ny MWE Shina Lalàna Birao mba hanomezana feno isan-karazany ny ara-dalàna ny asa sy ny raharaham-barotra torohevitra ireo orinasa Shinoa sy orinasa iraisam-pirenena manao raharaham-barotra amin'ny Shina
Avy amin'ny Shanghai birao, MWE Shina Lalàna manolotra isan-karazany ny sehatry ny traikefa.
Lalàna Hentitra ny Topimaso Ny Shanghai birao, naorina tamin'ny, efa tapaka fantatra noho ny asa eo nahazo loka varotra ao Shina. Indrindra indrindra, dia manoro hevitra mpanjifa eo amin'ny olana mahakasika ny asa fanorenana sy foto-drafitr'asa, ny fiarovana, mivantana avy any ivelany ny fampiasam-bola, fiombonana, acquisitions. Lalàna Hentitra ny topy maso Naorina tamin'ny taona, LPA efa mandeha amin'izao fotoana izao mihoatra ny mpisolovava amin'ny roa anjara fanompoana ao Paris sy Hong Kong. LPA mpisolovava' ny manam-pahaizana fahalalana maro ny manam-pahaizana manokana ny faritra dia manome fahafahana azy ireo mba hiatrehana ny tena isan-karazany ny mpanjifa' zavatra takiana.
Lalàna Hentitra ny topy maso Troutman Sanders LLP dia Lalàna iraisam-pirenena Hentitra mihoatra ny mpisolovava, ary enina ambin'ny folo anjara fanompoana ao Amerika Avaratra, Eoropa sy Azia.
Natsangana tamin'ny, ny orinasa ny lova, ny traikefa be dia be, miavaka tompon'andraikitra sy tsy azo hozongozonina ny fanoloran-tena ny asa fanompoana dia efa nahangona mafy, hatry ny ela. Lalàna Hentitra ny topy maso Clyde Co dia mavitrika, fanitarana haingana ny global Lalàna Mafy nifantoka tamin'ny fanomezana tanteraka ara-dalàna ny fanompoana mpanjifa eo amin'ny sehatra fototra. Dia manoro hevitra ny orinasa izay tao am-po eran-tany ny varotra sy ny varotra. Ny fitambaran'ny sehatry ny fahaizany, ny toe-tsaina ara-barotra sy in-lalina. Lalàna Hentitra ny topy maso Bryan lava-bato dia mifantoka rehetra ny hery sy ny ezaka amin'ny manome ny tsara indrindra azo atao solontena ara-dalàna bebe kokoa ny mpanjifa' zavatra mahaliana. Miara-miasa akaiky amin'ny Azia birao miorina ao Hong Kong, Beijing, Singapore ary Tokyo, ny Shanghai birao maneho ETAZONIA, Eoropa sy Azia orinasa nitarika raharaham-barotra ao Shina sy manerana ny faritra Azia-Pasifika, sy ny orinasa Shinoa any. K L Vavahady LLP maneho mitarika ny global orinasa, ny fivoarana sy ny afovoany-tsena ny orinasa, ny renivohitra-tsena ireo mpandray anjara, sy ny mpandraharaha eo isaky ny orinasa lehibe vondrona toy izany koa ny vahoaka sehatry ny fikambanana, ny toeram-panabeazana, fikambanana mpanao asa soa sy ny olona. Ny fomba fanao dia robustly iray. Isika iraisam-pirenena ara-barotra ny Lalàna Mafy amin'ny anjara fanompoana ao Beijing, Dubai, Hamburg, Hong Kong, Le Havre, Londres, Monaco, Paris, tany piraeus, Shanghai ary i Singapore. Ny mpanjifa isan-karazany avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena lehibe ny orinasa kely, hany mpivarotra sy ireo olon-tsotra. Isika fanao amin'ny teny anglisy Mayer Volontany ny JM Hong Kong birao dia an-trano ny iray amin'ireo lehibe sy lava-nanorina Orinasa Lalàna ao Hong Kong. Conveniently toerana ao Afovoany, efa maherin'ny ireo mpisolovava monina ao Hong Kong, manokana ao amin'ny orinasa isan-karazany.
Ny Shanghai birao nanokatra ny varavarany tamin'ny taona
Isika dia afaka manome ny mpanjifa amin'ny feno ary tafiditra isan-karazany. Simon shang natao Mpiara-miasa dia ny fanompoana manontolo Lalàna Mafy monina ao Shanghai, Shina. Ny mpisolovava rehetra ao amin'ny mafy hizara ny fahitana hoe: fanoloran-tena ny maha-matihanina sy tsara indrindra ao amin'ny fanasongadinana rivo-piainana aza tia tena. Simon shang natao Mpiara-miasa foana no manana tanjona mba hanome kalitao ambony sy lafo-mahomby ara-dalàna. DLA Piper nanjary iray amin'ireo lehibe indrindra ny ara-dalàna mpanome tolotra ao izao tontolo izao tamin'ny taona ny alalan ny fiombonana tsy tafiditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna.
Raha lehibe amin'ny ambaratonga, ny fiombonana paikady dia tsotra - mba hamoronana fikambanana iraisam-pirenena ny fomba fanao ara-dalàna mahavita mikarakara ny manan-danja indrindra ara-dalàna ny zavatra ilain'ny.
Sidley Austin LLP dia global Lalàna Mafy, eo ho eo amin'ny mpisolovava ao fito ambin'ny folo birao.
Isika dia manome malalaka isan-karazany ny ara-dalàna asa mba hanomezana izay ilain'ny ny isan-karazany ny mpanjifa fototra. Ny stratejika fametrahana ny anjara fanompoana ao amin'ny manan-danja ny orinasa sy ny ara-bola foibe amin'izao tontolo izao dia alefa antsika. Yashi manatanteraka io asa io amin'ny alalan'ny fahatakarana ny mpanjifa' ny soatoavina sy ny fitakiana sy fitaovana enti-miasa mifanaraka paikady mba hanatrarana ny tanjona. Amin izany fomba izany, Yashi mifanaraka tsara ilaina ny mpanjifa sy hahazo ny fahatokiana. Ny mpanjifa dia manome lanja ny asa sy ny fifandraisana amin'ny antsika, satria mandray ny tsy manam-paharoa.
Asa Famaranana ao Shina - Onitra sy ny Fandroahana tsy ara-Drariny - R P Shina Mpisolovava
Famaranana ny mpiasa mitaky ny mitandrina ny fanombanana ny zava-misy, toy ny mpiasa ny tombontsoa hankafy ny fiarovana matanjaka kokoa raha oharina amin'ny hafa ny olona, ary ny tsy manaraka ny fitsipika mifehy ny asa mety hiteraka zo noho ny fandroahana tsy ara-drariny ny onitraFamaranana ny asa ny fifanarahana dia dingana voajanahary amin'ny saika isaky ny orinasa lifecycle. Na ireo antony nahatonga ny fandroahana mpiasa dia mifandray amin'ny fampisehoana ny olana, fanavaozan-drafitra na namindra ny raharaham-barotra, na ara-bola ny ady mafy ny orinasa - misy niavaka toetra mampiavaka ny asa ny lalàna Shinoa izany mampanahy ny rehetra mpampiasa ny fiomanana ho amin'ny famaranana. Mety hahagaga ny vahiny mpitantana Shinoa lalàna ny asa amin'ny ankapobeny dia heverina fa 'mpomba ny mpiasa'. Mifanohitra amin'ny mahazatra ny finoana sy ny fomba fijery ny any amin'ny firenena hafa, ny haavon'ny fiarovana ara-dalàna ny mpiasa ao amin'ny famaranana ny fifandirana mihoatra noho ny maro ny firenena tandrefana, amin'ny maha-famaranana ihany no avela eo amin'ny sasany noho ny antony voalazan'ny ao amin'ny manan-danja ny fitsipika ara-dalàna.
Noho izany, ny orinasa dia matetika no voatery manao severance fandoavam-bola ny faranana ny mpiasa. Ho an'ny isan-taona momba ny asa, ny mpiasa mba handray ny iray volana ny karama (na tapa-bolana ny karama raha toa ny asa fe-potoana fohy kokoa noho ny enim-bolana).
Ny tena isa dia nahatratra ny fara tampony izay ny karama isam-bolana mihoatra ny in-telo ny karama salantsalany isam-bolana ao amin'ny tsirairay tanàna. Araka ny lalàna, amin'ny toe-javatra ireo ny kajy dia mifototra amin'ny telo ny fotoana ny eo ho eo an-toerana, isam-bolana karama, ny vola aloa ho an'ny tsy mihoatra ny roa ambin'ny folo taona ny asa.
Na izany aza, ny famaranana ny toe-javatra izay latsaka eo ambany fandroahana tsy ara-drariny dia tsy iharan'ny double onitra ara-toekarena, fa matetika miafara amin'ny asa disadisa fa tsy maintsy ho voavaha amin'ny asa fanelanelanana na ny fitsarana.
Amin'ny ankapobeny, tsy misy fidiram-bola ny hetra dia aloa eo amin'ny tambin-karama (ankoatra: severance fandoavam-bola rehefa lany ny asa fifanekena) raha tsy ny vola mahafeno ny ara-dalàna tokonam-baravarana ny in-telo ny eo ho eo ao an-toerana isan-taona ny karama ny taona lasa, izay nitranga ihany ny ampahany ambany amin'ny tokonam-baravarana dia afa-miala amin'izany ny fidiram-bola ny hetra.
Tsara homarihina fa ny handroahana vahiny mpiasa dia mety ho iharan'ny isan-karazany kajy ny onitra arakaraka ny fitsipika ao an-toerana.
Maro ny vahiny mpiasa mahazo ambony be karama noho ny Shinoa mpiara-miasa aminy, sy amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny satrony mifototra amin'ny telo ny fotoana ny eo ho eo isam-bolana eo an-toerana ny fidiram-bola dia mora foana ho nihoatra. Ao Shanghai, ohatra, severance fandoavam-bola ho an'ny ireo niala ny tanindrazany tsy mifototra amin'ny kajy ny fitsipika momba ny PRC Asa Fifanarahana Lalàna, fa ao amin'ny olona tsirairay ny fifanarahana ao amin'ny mpila ravinahitra asa fifanarahana. Ny mpampiasa mba handroaka mpiasa raha tsy misy ny maha-foto-kevitra ny severance fandoavam-bola fepetra mandritra ny fe-potoana fizahan-toetra, izay ny mpiasa mba ho voaroaka dia henjehina araka ny lalàna, ary amin'ny toe-javatra izay ny mpiasa mafy manimba ny raharaham-barotra' tombontsoa, na ho zava-dehibe mandika (fifanarahana) orinasa fitsipika nifanarahana asa. Noho izany, ny roa tonta dia tokony hifanaraka amin'ny zavatra fitondran-tena heverina ho 'mampidi-doza ny raharaham-barotra mahaliana'. Izany no tsara indrindra tratra amin'ny alalan'ny roa amin'ny antsipiriany ny asa ny fifanarahana sy ny asa boky izay manazava anatiny orinasa fitsipika (tsiambaratelo, manohitra ny fifaninanana, ny asa, fahataran'i, marary hiala, ny fampiasana ny orinasa loharanon-karena sns.) ary ny nahazoany ny mpampiasa manohitra ny tsy filazana amin'ny asa fifandirana. Toe-javatra hafa noho ireo voalaza etsy ambony dia mitaky severance fandoavam-bola sy ny fampahafantarana ny iray volana talohan'ny fandroahana. Na dia ny antoko mifanohitra izy manaiky rehefa famaranana, ny mpiasa dia mbola mitondra ny lohateny hoe mba hitaky onitra ara-toekarena. Noho ny toe-javatra izay mandrafitra ny tsy rariny ny fandroahana araka ny lalàna, ny mpiasa aza mety hitaky ny hamerenana ny teo aloha toerana ary, raha toa ka voaray indray dia vita (e.
ny mpampiasa efa voatendry mpiasa vaovao ho ny toerana), fanampiny onitra ara-bola.
Asa fanelanelanana dia efa maimaim-poana ho an'ny mpiasa ao Shina, ary koa be atao ny mampiasa ny. Mety ho sarotra ho tonga ny ponenana izay no azo ekena ho an'ny andaniny sy ny ankilany. Koa satria ny enta-mavesatry ny porofo fa lainga tanteraka amin'ny mpampiasa, ny sasany ny toe-javatra tokony ho nihaona mba hisorohana ny fandroahana tsy ara-drariny ny filazana araka ny lalàna. Toe-javatra sasany dia tonga dia heverina ny fandroahana tsy ara-drariny, toy ny fitondrana vohoka, fanalan nandritra ny reny miala toy izany koa ny famaranana marary na maratra, ny mpiasa (na arak'asa sy nonoccupational aretina ratra). Ny hany ankoatra ny tranga miavaka dia ny fandroahana mandritra ny vanim-potoana fisedrana na ho an'ny ny antony voalaza etsy ambony. Ny antony mahazatra mba hamarana ny asa fifandraisana underperformance Indraindray dia mpiasa tsy hihaona niova ny zavatra andrasana aorian'ny fanitsiana ny anatiny ny fitantanana ny rafitra na ny raharaha tanjona, ary amin'ny toe-javatra hafa ny olona fampisehoana tsy mitombo araka ny prospected aorian'ny fanomezana ampy fiofanana. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manome ampy porofo ny underperformance hanohitra ny filazana noho ny fandroahana tsy ara-drariny. Raha tsorina dia, ny mpiasa voakasika dia tsy maintsy omena fahafahana hanatsara. Izany dia mety ho tratra amin'ny alalan'ny fanofanana na reappointment ny asa vaovao.
Matetika, ny mpiasa tsy manaiky ny karama ny fanitsiana, rehefa nafindra any amin'ny toerana hafa, ary karama ny fanitsiana ny haavon'ny mety hampidi-doza ny asa fanelanelanana fifandirana.
Satria ny tanjona dia ny farany mahafeno ny fepetra takiana ho an'ny fandroahana amin'ny antony ny underperformance, dia mety ho tokony hatao mba hijanona malefaka izany fanajana. Tokony ho ny mpiasa tsy mba hanatsarana na dia eo aza ny fiofanana na ny famindrana, ny mpiasa dia tsy maintsy ho nampahafantatra tao amin'ny fanombanana ny fivoriana. Fandroahana ny vondrona lehibe ny mpiasa na avela eo amin'ny sehatry ny zava-tsarotra ara-toekarena, e. ilaina ny fanavaozan-drafitra nandritra bankirompitra fitoriana, na rehefa lehibe anatin'ny toe-javatra izay eo ambany ny tany am-boalohany ny mpiasa no nanao sonia fifanekena efa niova be, ary dia toy izany no fanatanterahana ny fifanekena dia tsy misy intsony ny azo atao. Ny fomba downsizing fangatahana fiaraha-miasa akaiky miaraka amin'ny mpiasa birao sy ny fakàna am-bavany amin'ny sendikaly ary ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa. Izany dia zava-dehibe ihany koa ny mahatsiaro fa ny Shinoa Mpiasa Lalàna Fifanarahana tsy manome ho mandeha ho azy ny famindrana ny mpiasa ao amin'ny fiombonana na fahazoana.
Tamin'ny Lasa Shina Mpisolovava ny China Lalàna Bilaogy
Jereo koa Shina"Iraisam-pirenena"Sekoly fianarana Lalàna
Amerikana ary indraindray Eoropeana mpianatra lalàna, ary vao nahazo diplaoma sekoly fianarana lalàna foana ny fifandraisana Shina mpisolovava mba anontanio ny zavatra tsy maintsy ataony ireo ho lasa iraisam-pirenena mpisolovava mifantoka amin'ny Shina ny lalànaNy toro-hevitra ho azy ireo dia matetika somary korontana dissertation mikasika ny tokony hanorenana mafy ara-dalàna ny fanorenana raha mitsahatra ny miasa amin'ny fanatsarana ny fiteny Shinoa ny fahaiza-manao. Avy eo aho dia hiresaka momba ny fomba saika isaky ny mpisolovava fantatro fotsiny latsaka an-mivadika ho ny fomba fanao faritra taorian'ny taona maro ho toy ny mpahay lalàna.
Izaho foana mahazo ny dikany izany mihitsy no ireo mpianatra lalàna tanora mpisolovava tsy te-handre.
Te-antsipiriany ary izaho no manome ny fampianarana eo amin'ny iray manaraka ny fo ny, fanorenana, fototra, fampiofanana, morphing, ary ny vintana. Te ho lasa Shina ny fampanoavana rahampitso, ary izaho milaza amin'izy ireo fomba raha toa ka manaraka ny mazava sy sarotra sy convoluted lalana mba ho lasa iray andro sasany. Eto dia misy antsipiriany, ny sasany izay manokana ramblings ary ny sasany izay purloined sy appropriated avy amin'ny olon-kafa.
Ny fampiharana ny lalàna mazàna dia mitaky toetra sasany
Iraisam-pirenena maro orinasa any amin'ny tanibe Shina mitady mpisolovava amin'ny Amerikana na Britanika lalàna ambaratonga sy avo lenta ny teny Sinoa fahaiza-manao, fa noho ny antony samihafa, izany dia sarotra ny miditra ny Shina tsena ara-dalàna raha tsy misy ny zava-nitranga teo aloha any Etazonia, na ny UK.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny Tandrefana amin'ny ankapobeny dia tsy afaka ny ho fahazoan-dalana Shina mpisolovava izy ireo ihany no lasa any Ivelany ny Solontenan'ny Mpisolovava.
ary misy ny lalàna izay mitaky ny raharaham-Bahiny Solontena mpisolo vava, fara fahakeliny, roa taona' traikefa amin'ny hafa ny fahefana vao afaka miasa ao Shina. Maro ny mpahay lalàna ny mahazo manodidina izany amin'ny niantsoany ny fotoana eo amin'ny hafa ny fahefana (anisan'izany Hong Kong) sy Shina.
Raha mandany ny enim-bolana indray andro ao amin'ny hafa ny fahefana sy ny sisa amin'ny taona any Shina, izay isaina ho toy ny taona iray hafa fahefana.
Raha manao izany nandritra ny roa taona, dia azo fidiana hiasa ao Shina amin'ny maha-Vahiny ny Solontenan'ny Fampanoavana. Mbola tsy afaka ny"fanao"lalàna ao Shina, kanefa tsy afaka ny hiasa. Amin'ny ankapobeny, ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia mba handany ny taona vitsivitsy voalohany mampihatra ny lalàna amin'ny lehibe ANTSIKA London Lalàna Mafy, ary avy eo dia mandehana any Shina ny hampihatra nandritra ny roa taona. Fomba izany dia hitondra ny Amerikana na ny Britanika momba ny lalàna sy ny fepetra takina avo lenta Lalàna Mafy traikefa. Na dia ny Sinoa no tena tsara, ny nanampy danja ny Lalàna Mafy ao Shina dia ny Amerikana ny Britanika araka ny lalàna fototra.
Raha toa ianao mandeha any Shina, avy hatrany rehefa avy nahazo diplaoma nanapaka an-zavatra dia afaka manolotra.
Zava-dehibe ny manamarika nihevitra fa ny tena manan-danja mitombo ny lanjany toy ny vahiny mpisolovava manao Shina ny lalàna dia ny ho afaka mamaky sy manoratra amin'ny teny Sinoa. Afaka order ny labiera na hiresaka momba ny toetr'andro ao Shinoa dia lehibe toy ny fizahan-tany, fa saika ny dikany araka ny vaovao mpisolovava izay lohan ny asa dia matetika ny fikarohana sy hamakafaka izay voasoratra ny lalàna sy ny fifanarahana. Etsy ankilany, tsy misy zavatra azo lazaina fa handeha ho any Shina tsara rehefa sekoly fianarana lalàna. Folo taona lasa izay raha nandeha avy hatrany i Shina ianao, dia mety ho ampy ny ara-dalàna ny asa vao nanomboka. Fantatro iray taonina tsara ny mpisolovava izay nandeha tany Japana na any Korea na Shina, ary nandany taona maro tany amin'ireo firenena ireo, ary amin'ny alalan'ny fanaovana izany dia lasa saika unemployable toy ny mpahay lalàna ao amin'ny United States. Ny fanatontoloana dia miova haingana, fa izany no mbola kely mampidi-doza sy amim-pahatsorana aho tsy mahalala ny zava-misy amin'izao fotoana tsara mba ho mpanoro hevitra na iza na iza. Efa nandre aza fa raha tsy te-ho mpiara-miasa amin'ny goavana ny Lalàna Hentitra, dia handeha ho any Shina ny voalohany dia mety tsara. Na izany aza, raha toa ka mitady ho Amerikana ara-dalàna ny asa, dia mety ho mbola tsara indrindra mba hijanona ao amin'ny Fanjakana, fara fahakeliny, roa taona taorian'ny nahazo diplaoma amin'ny sekoly fianarana lalàna. Miteny ny sekoly fianarana lalàna, ny iray amin'ireo fahita matetika mailaka ny Shina mpisolovava mahazo avy amin'ny lalàna ny mpianatra sy ny mety ho mpianatra lalàna, mangataka amintsika inona no tokony manomboka manao izao hanomana ny tenany ho amin'ny asa fampiharana lalàna Shina. Ny toro-hevitra momba izay ihany koa dia mety ho kely loatra Zen-tahaka ho an'ny ny tsirony, fa eto mandeha. Mahazo ny tsara indrindra ho any amin'ny sekoly fianarana lalàna ianao dia afaka, fa tsy ao Shina. Raiso ho toy ny orinasa maro sy ny fananana ara-tsaina sy ny tsy miankina ny lalàna iraisam-pirenena taranja araka izay azo atao.
Hahazo ny naoty tsara indrindra araka izay azo atao. Hone ny fiteny Shinoa ny fahaiza-manao betsaka araka izay azo atao.
Hone hafa na inona na inona teny vahiny fahaiza-manao anananao betsaka araka izay azo atao. Tato ho ato, efa hatao maro ny mailaka avy amin'ny olona izay efa miasa ao Shina amin'ny tsy mpisolovava asa, nanontany ny momba ny fahazoana mari-pahaizana momba ny lalàna avy amin'ny teny anglisy lalàna fandaharam-pianaran'ny sekoly mifamatotra ao amin'ny lalàna Shinoa an-tsekoly. Ny valin'ny ireo dia mba manontany izay fa mari-pahaizana dia hamela azy ireo raha vantany vao tanteraka izany, satria dia ny fahalalana fa TSY mamela anao ho fampiharana ny lalàna na ny any Shina na any Etazonia.
Raha na iza na iza mino izany aho tsy mety na, raha misy olona mahafantatra tsara ny firenena iray dia fahazoan-dalana ny diplaoma iray amin ireo ambaratonga ho fampiharana ny lalàna, masìna ianao aoka aho hahafantatra amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra eto ambany.
Ny fampiharana ny lalàna ny any Shina na miaraka amin'i Shina koa ny sasany dia mitaky toetra.
Maro loatra ny olona hahazo ho lalàna rehefa tsy mifanaraka ho azy ireo sy ny farany izy ireo tsy faly. Tokony nampirisika te mba ho lasa mpisolovava na tsy manahirana.
Tokony nampirisika te ho lasa Shina mpisolovava na tsy manahirana.
Ny boky, Shina ny TALE jeneralin'ny: Voices ny Traikefa hatramin'ny roa-polo Iraisam-pirenena Raharaham-barotra ny Mpitarika, ny lisitry ny toetra filoha tale jeneraly mikatsaka ny mpila ravinahitra ny mpitantana ho an'i Shina sy ireo toetra tsara tarehy be toy izany toetra ilaina mba ho tsara iraisam-pirenena mpisolovava na ny tsara Shina mpisolovava. Indro ny lisitra, miaraka amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny sora-mandry: taona vitsy lasa izay, mpianatra lalàna nanoratra e-mail tamiko ny rohy any amin'ny Quora fanontaniana sy valiny momba izay mitaky olona iray mba hahombiazany ao amin'ny miasa ho an'ny orinasa ao Shina, ho toy ny vahiny. Ny mpianatra lalàna manokana antsoina ny valinteny nomen i Davida Wolf ary nanontany raha toa ireo zavatra mihatra Shina mpahay lalàna koa. Dia tena azo antoka fa hanao Ny fanontaniana manokana ao amin'ny Quora dia"Inona no manan-danja ny fahaiza-manao tena ilaina mba hahita fahombiazana miasa ho an'ny orinasa ao Shina, ho toy ny vahiny."David Wolf ny tsara valiny dia mampiseho ny maha-iray isa noho ny betsaka indrindra (anisan'izany ny isan'ny malaza ao Shina ny mpamaham-bolongana) no nifidy azy io isa iray. Wolf ny valiny dia hoe"toy ny olona iray izay efa nanamby amin'ny anaran'ny lehibe sy kely ny orinasa eto Shina, dia afaka milaza aminareo aho ny karazana tanora vahiny izay mahazo nokaramaina dia ny tena na ny rehetra ireto manaraka ireto: (ny fanehoan-kevitra dia sora-mandry) ny ankamaroany misolo tena ny orinasa manao raharaham-barotra amin'ny tsena vao misondrotra firenena. Izany no naka ahy taona maro mba hanorina ny tambajotra sy ny tsy maka tsy tapaka ny fifandraisana ary mandeha foana izany. Ny asa no maha-samihafa toy ny fiarovana ny famoahana ny roa nety natao angidimby ao papouasie-Nouvelle-Guinée, ny fametrahana ny rafitra ara-dalanan'ny fananantany hifindra tain-drendrika avy any Kanada ny Polonina ny atitany, ny fanaraha-maso an-jatony ny pitsarana sy ny fanelanelanana ny raharaha tao Korea, ny fanampiana ny olona tsy fampihorohoroana tao Japana, ary naka ny trondro vokatra ao Shina mba hanangona amin'ny trosa. Aho no atao hoe toy ny iray amin'ireo telo hany Washington Fanjakana dia Mahavariana ny Mpisolovava ao amin'ny Lalàna Iraisam-pirenena aho dia AV laharana amin'ny Martindale-Hubbell Lalàna laha-Tahiry (ny avo indrindra ampy), izaho laharana. tamin'ny namany sary, ary izaho Super Mpisolovava Izaho matetika mpanoratra sy ny vahoaka mpandaha-teny amin'ny fanaovana raharaham-barotra eo amin'ny Azia sy foana aho handeha eo amin'i Etazonia sy Azia. Izaho matetika indrindra dia miteny amin'ny lalàna Shina ny olana ary izaho no hitarika mpanoratra nahazo ny mari-pankasitrahana Shina Lalàna Bilaogy. Ny Gazety-boky Forbes, Harena Gazety, ny Wall Street Journal, Mpampiasa vola Isan'andro ny Raharaham-barotra, Fandraharahana Herinandro, Ny antenimieram-Pirenena ny Lalàna Journal, Washington Post, Ny ABA Gazety, Ny mpahay Toekarena, ny Newsweek, NPR, Ny New York Times, ary Ao ny Torohevitra rehetra nanadihady ahy momba ny lafiny samihafa momba ny lalàna iraisam-pirenena fanao. Ao tandem ny lalàna iraisam-pirenena ny team teo ny mafy, tsy mifantoka amin'ny fametrahana ny ny fisoratam orinasa any ampitan-dranomasina (via WFOEs, Rep Birao na ny Mpiray Ventures), fandrafetana fifanarahana iraisam-pirenena (NDAs, OEM Fifanarahana, fahazoan-dalana, ny fizarana, sns.), miaro ny IP (famantarana, ny varotra zava-miafina, dia ny zon'ny mpamorona sy ny patents), sy ny fanaraha-maso M Ny varotra. Isika dia miresaka momba ny fampiharana ny lafiny lalàna Shinoa sy ny fomba fiantraikan'ny raharaham-barotra misy. Isika dia ho nilaza ianao no miasa ary inona no tsy ary izay anao amin'ny maha-businessperson atao ny mampiasa ny lalàna, ny tombony. Ny tanjona dia ny hanampy ny orinasa efa any Shina na mikasa ny hiditra ao Shina, mba tsy handrava ny tany vaovao ao kevitra ara-dalàna na ny politika. Ny fahalalana lalina ny ao Shina ny rafitra ara-dalàna, ny kolontsaina, sy ny raharaham-barotra ny toetrandro ho amin'ny Shina fanao iray amin'ireo tena be pitsiny ao amin'ny ANTSIKA. Ny mpisolovava efa nahazo laza iraisam-pirenena ho an'ny fanomezana ny fanapahana-sisin'ny ara-dalàna ny vahaolana ho ANTSIKA - ary monina any ivelany ireo orinasa manao raharaham-barotra, na amin'ny Shina. Ny traikefa midadasika mizara tsara ao Shina ny fikambanana manokana ny fananganana azy, ny fifanarahana, ara-tsaina ny fananana zavatra, sy ny fifandirana fanapahan-kevitra manome ny mpanjifa amin'ny fiarovana ny fahafantarana ireo efa tena za-draharaha ara-dalàna ny ekipa ao ambadiky azy ireo.
Toetra Lehibe Mpisolovava ireo toetra Ireo dia mamorona ny fiantraikany
"Ny fomba mahery vaika indrindra mba handresy ny tohan-kevitra dia amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana, afaka manao ny olona hahita ny lalana lojika ny mpanohitra."Lehibe ny mpahay lalàna iray izay mahomby maka ny andraikitry ny mpanjifa ny raharaha
Niasa toy ny mpahay lalàna mahakasika ny fampiharana azo tsapain-tanana ara-teoria sy ny fahalalana ny hamaha ny manokana individualized olana.
Izany rehetra momba ny fomba zava-baovao ny fanaterana ny fanompoana ara-dalàna dia.
Inona no atao mba ho fahombiazana eo amin'ny asa ara-dalàna. Ireto misy vitsivitsy toetra izay tokony handinika ny ho lasa lehibe ny mpisolovava: Ny Fehezan-dalàna Professional Mifehy ny mpahay lalàna dia isan'ny nandray ny fitsipika, izay manompo ho toy ny toro-lalana ho amin'ny mpisolovavany nandritra ny asa. Ireo fitsipika ireo dia ao amin'ny fanarahana ny fitsipika ankapobeny professional mifehy ny Fisotroana.
Ny mpahay lalàna dia tsy miankina amin'ny fanatanterahana ny adidy sy ny izy dia tokony tsy hamela ny tombontsoa manokana na antoko fahatelo-ny fitarihana azy hanao ny andraikiny ny mpanjifa.
Mpisolovava iray dia voatery tsy hamela na inona na inona fandikana ny fahaleovantena. Ny mpanjifa tsy maintsy manana fahatokian-tena, na hatoky ny mpahay lalàna ary mpisolovava tokony ho ampy fahaizana mba hahazo ny fahatokiana ny mpanjifa sy ny mety ho tratra raha ny mpisolovava manana ny an'ny tena manokana-pahamendrehana, amim-boninahitra ary amim-pahamarinana. Io no santatra sy fototry ny zo sy adidy ny mpisolovava Raha tsy misy ny fitsipiky ny azo antoka, dia hisy tsy matoky sy ny fifampitokisana eo ny mpisolo vava sy ny mpanjifa. Ity fitsipika ity dia tsy fotoana voafetra ihany ary izany dia mihatra misy vaovao izay mpahay lalàna dia ho nampahafantatra ny mpanjifa amin'ny fanatanterahana ny asa ara-dalàna.
Izany fitsipika izany dia manakana ny mpahay lalàna avy po ny tenany amin'ny hafa asa na hetsika ny foto-kevitra izay tsy mifandray amin'ny asa ara-dalàna ary manitsakitsaka ny maha-olona azy, fahaleovan-tena, sns.
Ny mpahay lalàna dia tsy afaka hanambara ny tenany na hitady manokana ny dokambarotra tao amin'ny fomba tsy mendrika. Izy dia tsy afaka manao dokam-barotra hahazo bebe kokoa ny mpanjifa voarara nanambara tao amin'ny tranonkalany ny anaran ny mpanjifa izay no nisolo-tena ny mpahay lalàna. Ny mpahay lalàna dia mitaky asa eo amin'ny mahaliana ny mpanjifa. Izy dia tokony hametraka liana mialoha ny Fitsarana Ny lehibe mpisolovava iray izay manana andraikitra mba hahazoana antoka ny rariny ho an'ny ny mpanjifa, dia tsy hahatakatra ny raharaha fa koa mitarika ny mpanjifa amin'ny alalan'ny rafitra ara-dalàna. Izy no ilay iray izay afaka mora foana ny manao ny fahasamihafana rehetra misy ao amin'ny mpanjifa ny raharaha. Misy maro mampiavaka izay mahatonga ny mpahay lalàna mahomby. Iray tokony ho fantatry ny rehetra ny lalàna (indrindra fa any amin'ny faritra izay izy ireo dia miasa), tokony hisy na inona na inona izay dia nifalihavanja. Ho lehibe ny mpisolo vava dia tsy tokony hamaivanina ny soratra fahaiza-manao izay ilaina. Mpisolovava mandany be ny fotoana nametrahana fitalahoana sy ny antontan-taratasy amin'ny fitsarana. Ianao dia azo inoana fa hamorona toerana tsara ho an'ny mpanjifa tsara raha manoratra fahaiza-manao. Ny fitalahoana dia tsy maintsy ahitana ny fitsipika ankapobeny omena eto ambany: Isaky ny mpisolovava mila za-draharaha kokoa ny olona ho mpitari-dalana azy, ary izany no ilaina mba ho lasa mpisolovava lehibe, tsy misy araka ny tokony ho tari-dalana ianao dia afaka mametraka ny tenanao ho amin'ny hatsaran'ny asa, ary izany dia hanampy anao amin'izao ny raharaha ao amin'ny sarobidy indrindra izany.
Mba ho lasa mpisolovava lehibe tokony ho mihoatra mahalala fomba, - paharetana sy amim-panajana manoloana ny mpanjifa, ny Mpitsara, ireo mpiara-miasa aminy, ny fitsarana mpiasa sns.
Ny maha-matihanina dia miankina amin'ny fomba anao hanolotra ny tenanao ao amin'ny Fitsarana, ianao dia tokony ho malina tsara manoloana ny fitondran-tena.
Ny fitondran-tena maneho ny maha-izy azy, ho lasa lehibe ny mpisolovava anao tokony hianatra ny fomba mandray andraikitra sy maneho hevitra amin'ny toe-javatra isan-karazany.
Ho ara-dalàna ny mpino, ny fitsipi-pitondran-nandray dingana hafa ny maha-zava-dehibe. Ny maha-matihanina, dia tokony hikatsaka ny mba hihazonana ny fenitra ambony indrindra amin'ny fahamarinan-toetra, fahamarinan-toetra, sy ny rariny eo amin'ny fitondran. Tsy hamoaka ny fanazavana nomena anao amin'ny mpanjifa, dia afaka manome ny vaovao any amin'ny fitsarana izay ilaina, ary afa-tsy ny halehiben'ny ianao dia tsy maintsy manao izany. Fanjakana tsirairay dia efa napetraka ny fitsipika mifehy ny mpahay lalàna ny fitondran-tena. Ataovy azo antoka fa hanaraka ireo lalàna ireo raha tsy izany ianao mihazakazaka ny mety ho famaizana, izay mety hiafara amin'ny fampiatoana na fisintonana ny fahazoan-dalana. Raha ny heloka bevava nataon'ny ianao, tsy ianao ihany no ho foto-kevitra ny ho faty ihany fa matihanina fitondran-tena. Arakaraka ny maha-heloka bevava, ianao dia afaka very ny asa ihany koa. Ho lehibe ny mpisolovava azy dia tsy ilaina tokony mahazo olo-malaza enina. Noho izany tokony ho ny tenanao tsara indrindra amin'ny ny asa, ho vonona ho isan-karazany ny zava-misy. Ho mpisolovava momba izay ny tsirairay dia afaka miantehitra alohan'ny fametrahana ny raharaha.
Misy ny mpahay lalàna, izay mihevitra ny tenany ho mahomby izy ireo, rehefa tonga ny mpiara-miasa amin'ny avo-powered Lalàna Mafy, ny sasany faly amin'ny fiainana ny solo fanao, ny sasany hafa mihevitra ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra na ny tombontsoam-bahoaka ny asa mba ho ny fanalahidin ny fahombiazana.
Amin'ny farany, ny olona iray dia ho lasa lehibe, mpisolovava izay manana ny nandevina ny tenany tao amin'ny toe-javatra izy no mifampiraharaha sy mamakafaka, handinika ary avy eo dia hamarana ny teniko. Hianatra ny fomba aoka handeha ny adin-tsaina sy ny fitantanana azy io isan'andro fototra. Ity dingana ity dia hanome fahafahana anareo mba mieritreritra bebe kokoa tony sy mazava izay ho tena mahavokatra ho an ny asa. Ho liana amin'ny ny asa, ny mankafy ny asa dia tsy hamela anao mba mahatsapa ho vesaran'ny ary ianao dia mianatra isaky ny zava-baovao ny zava-nitranga, tsy hanenina ny safidy. Lehibe mpisolovava iray izay manome ny an-jatony ny asa tsy tamim-pihambahambana sy tahotra ao anatiny. Mba haharaka ny fanontaniana anao te-hanontany, hevitra te-hametraka ao amin'ny tohan-kevitra sy ny zava-misy firaketana an-tsoratra azy ireny amin'ny fitsarana kahie.
Manomana ny fitsarana kahie dia iray amin'ireo asa manan-danja indrindra dia ahitana ny zavatra rehetra izay tokony nandritra ny fotoam-pitsarana.
Ny kahie tokony ho hita taratra ny fepetra manokana ny raharaha. Ny fitsarana kahie dia tokony ahitana ny: raha Vao hametraka ny taratasy ilaina mikasika ny raharaha, dia hiatrika ny isan'ny fe-potoana farany.
Raha ny tranga no ren ny mpitsara izy dia milaza ny mpanohitra inona no porofo ianao dia nampidirina ao amin'ny fitsarana.
Manao araka ny tokony ho izy dia manamarika ireo fe-potoana sy ny lehibe mpahay lalàna aza malahelo mba hihaona ny tsirairay amin'izy ireo. Ny singa maro izay lehibe mpisolovava mila manaporofo mba handresy. Mila drafitra mialoha tsara mba ho azo antoka fa afaka manaporofo fa tokana isaky ny singa ny raharaha, ary tokony ho afaka handà ny singa ny mpanohitra. Afaka mahatakatra ny izay porofo dia hanampy anao mba hanaporofoana ny zava-misy. Fitsipiky ny porofo dia hamaritra na tena manokana ny tahirin-kevitra, ny fanambarana dia raisina ao amin'ny fitsarana na tsia. Tokony ho vonona amin'ny ampy fikarohana mba ho azo antoka ianao ho afaka hanolotra ny porofo tokony handresy. Tsy tokony manapaka ny mpanohitra, ary indrindra ny mpitsara. Dia hahazo ny fahafahana maneho ny tenanao mba hanam-paharetana sy mihaino ny mifanohitra amin'izany antoko tsara. Mooting dia ny fanolorana izay atao am-bava ny olana ara-pitsarana na ny olana mialoha ny mpitsara manohitra ny fanoherana torohevitra. Izany dia hetsika ivelan'ny fianarana asa atao any amin'ny sekoly fianarana lalàna. Izany dia manampy amin'ny fananganana ny fahatokiana ary manampy mba hahafantatra ny fomba ankehitriny ny raharaha eo anatrehan'ny mpitsara. Maneso ny fitsapana manome fahafahana lehibe mba hianatra avy amin'ny fahadisoana alohan'ny lasa mpisolovava. Misy matihanina mety hieritreritra izany dia ampy ho tsara mpisolovava. Izay ny zava-misy azy fotsiny dia tsy ampy amin'izao fotoana izao ny fisehoan-javatra, mba ho marina tsara ny mpisolovava.
Ny mpisolovava Lehibe kokoa ny famoronana, maneho hevitra, ary ny tsy manapaka ny mpanohitra sy ny mpitsara.
Izy dia manana fahafahana mieritreritra ho izy, dia foana ny hanao ny tsara fikarohana, ary efa fandalinana ny fahaiza-manao. Fantany ny fomba mba hanorina tsara ny fifandraisana amin'ny fitsarana sy ny hafa ny vatana ary foana ny maha-olona azy. Ilaina izany, mba ho marina amin'ny fitsarana, ny mpiara-miasa aminy, sy ny mpanjifa. Lehibe mpisolovava mahalala tsara ny fomba fanontaniana ilay vavolombelona ary hanana ny avo lenta ny etika.
Mpisolovava ao Shina
Isika dia ekipa za-draharaha mpisolovava moninaAo
Shina ary manolotra isan-karazany ny tolotra ara-pitsarana ho an'ny eo an-toerana sy avy any ivelany mpanjifa
Tao Shina, dia tena mampidi-doza ny fiara ny moto-ny tsy manan-kery ny fahazoan-dalana. Quora
Inona miezaka aho ny milaza izany
Marina izany fa ianao dia tsy mahazo mitondra fiara amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahazoan-dalana ao Shina, tokony Shinoa fahazoan-dalanaNy ho faty any Shina mitondra fiara tsy misy fahazoan-dalana na raha mamo dia afaka ny ho tena hentitra, indrindra raha misy vahiny.
Soa ihany, ny fampiharana ny lalàna sy ny sazy mitady ho uneven.
Amin'ny tsara indrindra ianao dia tsy maintsy mandoa lamandy, amin'ny ratsy - afaka ho nangataka mba handao ny firenena (inoana fa azo atao, ity no mety raha mitondra fiara tsy misy ny fahazoan-dalana sy ireo tafiditra amin'ny loza, na vokatry ny loza). Farafaharatsiny ianao dia ho nametraka fanontaniana be dia be momba ny lalana, faritany haleha izy, drafitra, etc, izany dia ho hassle.
Maro ny fifamoivoizana ny polisy ihany koa ho mora kokoa ny mitarika anareo ny sy hanao ny fanaraha-maso ny fahazoan-dalana raha toa ianao ka hita fa tsy Sinoa.
Eo amin'ny lafiny hafa indray, be dia be ny azy ireo no mety ihany koa ho mety tsy mitarika anao eo amin'ny fiheverana fa mety ho be loatra ny olana mba hanaisotra ny olona nandritra izay tsy miteny ny teny, dia toy izany ny karazana hanipy-izay iray ianao dia hahazo. Ianao koa mila manana manan-kery môtô-ny fiantohana ny manokana sy ny fiara iray any Shina, ary indrindra ara-dalàna ny mpivarotra dia tsy dia hivarotra ianao bisikileta raha tsy manana fahazoan-dalana sy ny marina ny taratasy, noho izany dia afaka ny hiverina ho azy ireo. Sinoa fifamoivoizana dia tena tena ratsy avy amin'ny Tandrefana ny fomba fijery. Fiara ao ETAZONIA dia azo antoka satria ny olona rehetra dia mahafantatra ary mankatò ny lalàna.
Fiara ao Shina no ara-drariny soa aman-tsara ihany, satria ny rehetra dia mahafantatra fa tsy misy olon-kafa no handeha hanaraka ny fitsipika sy ny tena ny rehetra dia mahafantatra ny zavatra miandry azy.
Shina dia eo ho eo amin'ny, ny fifamoivoizana mifandraika amin'ny fahafatesana isan-taona araka ny firenena MIKAMBANA, IZAY raha ny antontan'isa ANTSIKA amin'ny ankapobeny dia latsaky ny. Izany no mampiahiahy mihitsy, fa ho toy ny hazakazaka am-bisikileta, mpandeha an-tongotra, na ny mpitaingina moto, ianao na mety hahazo anjara amin'ny loza, ary dia azo inoana fa mba ho tena hitera-pahavoazana. Ankoatra izany, raha mitondra fiara ianao ao Shina amin'ny maha-vahiny tsy misy traikefa amin'ny Sinoa ny fifamoivoizana ianao kokoa ny ho amin'ny loza. Raha toa ianao ka ny lehilahy foana manaraka ny fetra sy foana nijanona teo ny jiro, Sinoa mpamily dia mety ho tsy nahy-kanina ny fiara fotsiny, satria izy ireo tsy zatra izany. Braking mafy ho an'ny mpandeha an-tongotra voalohany ny dingana avy eo anatrehanao, dia fomba mora mahazo aoriana-tapitra ny taxi-mpamily aoriana ianao izay azoko antoka dia tsy nijanona. fa any ivelany ny vitsivitsy amin'ireo tanàn-dehibe, misy sarintany na lalana famantarana dia handeha ihany no manana ny endri-tsoratra Sinoa sy ny pinyin azy. Koa raha mahazo ho very, tsy hanadino ny mangataka ny toro-lalana amin'ny teny anglisy. Farany, ary amin ny hevitry ny zava-dehibe indrindra, raha toa ka manana loza teny an-dalana ao Shina, dia tsy ho toe-javatra izay afaka manazava ny tantara na ny fomba fijery ny zava-nitranga ny mpandraharaha hafa fiara sy ny mamaly ny polisy.
Tsy handeha tsara ho anao.
Ny olona tsy tena mampiasa môtô na ny môtô ho lavitra ny fitaterana ao Shina.
Any ETAZONIA ny môtô dia ny mpanjakan ny hanokatra ny lalana, ny nofy ny mpirenireny. sns.
Ny olona any China tsara tarehy be ihany no mampiasa ity karazana fitaovam-pitaterana fohy ny halavirana sy ny fivezivezena an-tanàn-dehibe, satria izany dia mora ho an'ny olona iray ny miasa, fa mety tsara tarehy be rehetra tsy miraharaha ny fifamoivoizana, famerana ny lehibe kokoa ny fiara, ary dia tanteraka noho ny 'sivana' na 'lane-niantsoany' ny andalana ny be mponina fifamoivoizana. Ny fitsipika dia tsy mitovy amin'ny toerana, ary mety ho fanaintainana ny ny fikarohana ny lalàna ao an-toerana na ny famerana ny isan-tanàna sy ny faritany mikasa ny handeha amin'ny alalan'ny. Na môtô sy môtô dia somary hita ao Shina, toy ny aho hoy izy ireo efa tsy ampiasaina lavitra travel, ary toy izany koa ny ankamaroan'ny bisikileta ianao dia ho afaka ny hividy na ny hofan-trano, dia ho eo amin'ny milina, izay tena tsy tsara noho ny elanelan-tany lavitra. Raha te zavatra lehibe noho izany, tsy dia azo antoka fa ho lafo Japoney manafatra. Môtô sy môtô matetika nangalarina ao Shina ary tsy fahazoan-dalana hidirana ny mitaingina iray tsy bisikileta hidin-trano sy ny kodiarana hidin-trano. Ireo no marina, ny zavatra rehetra dia afaka mieritreritra ny eny an-tampon'ny lohako nahoana izany no mety ho ratsy hevitra. Tsy milaza aho hoe tsy tokony hanao izany, izany dia tena azo atao, fa io no handeha haka ny.
Tsy miankina amin'ny Fananana trano any Shina No Tena Leasing
Ny governemanta federaly no manana azy rehetra
Isika dia tsy afaka ny tsy manana na inona na inona,"Da Xia niresakaAvy eo izy nijanona kely alohan'ny nanampiany hoe,"Eny, izaho dia afaka manokana ny kahie."Izy avy eo dia nivadika ny boky nidina teo amin' ny latabatra izay nipetraka teo anoloan'ny antsika toy ny hoe tsy mendrika na dia ny zo manokana."Ny olona indraindray, mandany ny vola rehetra izy efa nanao ny tranony,"ny valo amby roa-polo taona mpampianatra nanohy,"ary rehefa afaka fito-polo taona ny governemanta ny maka izany indray avy amin'izy ireo."Ny olona tsy manana ny tranony ao Shina. Rehefa ny Shinoa ny olona milaza fa efa nividy an-trano izay tena dia midika fa izy nanofa izany avy amin'ny governemanta mandritra ny fito-polo taona. Rehefa izany fotoana izany dia ny fananana dia, raha ny fahitàna azy, miverina ny ara-dalàna tompony: Repoblika entim-bahoakan'i Shina. Toy ny fiara izay lease, ny governemanta Sinoa dia tsy noeritreretina mba handoavana ny fananana izany reacquires izany fotsiny dia mandeha indray ny Lehilahy sy ny fifanarahana dia atao. Ny amin'izao fotoana izao ny governemanta ao Shina izay namorona ireo fananana ny lalàna ihany no efa nisy ny kely mihoatra ny enim-polo taona ka tsy misy olona mahalala ny inona no tena mitranga rehefa fananana leases manomboka ho faty. Fa ny fihetseham-po iraisana momba ireo fitopolo taona leases toa tsy ho overtly tsara."Fotsiny isika nividy trano,"Amerikana namako iray izay no manambady vehivavy Sinoa nilaza tamiko faly erỳ indray andro, fa avy eo izy dia haingana redoubled ny fanambarana ary koa amin'ny mampiaka-tsoroka:"Eny, isika vao nividy an-trano mandritra ny fito-polo taona."Na dia azoko antoka fa olona iray no tsy mikasa ny ho velona fito-polo taona izao dia maro ny zavatra mikasika ny tsy tanteraka hividy ny fananany dia tiako fotsiny vola be dia be ny vola ho toa tsy mba hipetraka tsara azy raha tsy miaraka amin'ny maro manerana ny Fanjakana Afovoany.
Inona ny an-tanàn-dehibe Shinoa matetika miantso ny trano kokoa simplistically fantatry ny Tandrefana araka ny trano."Ny trano,"toy ny tsy avy any azia Atsinanana, dia niantso azy ireo, afa-misy any ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe vitsivitsy monina dia mbola manonofy ny mampihetsi-po avy any.
Ny ankamaroan'ny olona any Shina hiaina ao amin'ny trano avo be, sy efa tonga mba hilazana ny kely domiciles ao anatin'ny azy ireo ho toy"trano."Fa ny vola lany maro ireo trano any amin'ny faritra atsinanan'i Shina ankehitriny dia mitovitovy toy izany koa ho toy izany koa nomenclated rahalahiny any Andrefana. Dia tsy vitsy ny mahita trano ao Shina ny fivarotana ho an'ny araka ny manetry tena mitovy habe-trano tao ETAZONIA. Efa ho zato arivo dolara ho an'ny efitra iray, karazana crappy, lalamby fomba trano ao afovoan-kely, somary manan-danja tanàna atsinanan'i Shina. Ny loharanom-baovao dia tsy ny real estate appraiser, fa izany dia tsy sarotra ny maminavina ny trano fonenana ny vola lany amin'ny firenena iray, izay ny lohahevitra dia eo amin'ny molotry ny saika ny olon-drehetra avy ny vaovao ora miresaka lohany ho saranga antonony tanora ao amin'ny trano fisotroana kafe. Nanontany azy ny antony na iza na iza no nametraka izany rehetra izany vola ho leasing ny toerana dia mety ho farany dia ilaina mba hiverina any amin'ny governemanta izy ireo raha tsara vintana ny ho velona ela."Shina amin'ny fambolena ny firenena,"hoy izy namaly,"ny olona mieritreritra fa mila mba hanorim-ponenana sy hividy ny an-trano mba tsy hanana ahiahy.Misy maro ihany koa ny toerana mba ho azo avy hividy ny an-trano,"izaho koa, manolo-kevitra fa ny an-trano ny tompony no iray amin'ireo vaovao"lehibe telo te"ao amin'i Shina maoderina. Ny roa hafa maha-fiara sy ny asa tao amin'ny raharaham-barotra. Izy fotsiny isika ary nilaza izy fa izy no sambatra ho renter izay, mahagaga, dia mbola somary takatry ny vola.
Amin'ny farany, na dia ny fananana ny zo modely dia tsy fanavaozana alohan'ny leases manomboka ho faty izay tena isalasalana fa ny drafitra azo antoka fa ny olona iray dia mihoatra noho ny azo inoana fa ho afaka hiaina ao an-tranony nandritra ny fisian'ny ny fiainana.
Ny olona izay mametraka ny telo-polo taona no ho famonjena ny hividy trano iray dia mety tsy ho velona ela mba hahita ny lany ny ny lease. Na ny na ny ankizy dia ho afaka ny handova ny fananana amin'ny alalan'ny Shina ny lalàna ny fifandimbiasan'ny mihoatra ny teny hoe ny lease mbola ho hita eo. Zara raha dimy amby telo-polo taona lasa izay ny ampahany lehibe amin'ny mponina ao Shina no mipetraka ao amin'ny kaominina izay olona voatendry ny trano fonenana ary tsy nisy fahadisoan-kevitra momba ny tsy miankina ny fananana trano. Ny zava-misy fa olona afaka ankehitriny, tsara tarehy be ihany ny an-trano nandritra ny fisian'ny ny fiainany dia miandalana raha jerena ny alalan ny fikatsahana ara-tantara vao haingana. Tsaroako ny fomba renibeko dia nimonomonona mikasika ny fomba tsy misy tena tompony ny fananany any ETAZONIA satria tsy maintsy mandoa vola ny governemanta fananana hetra, na tsy maintsy nesorina avy hatrany."Ny momba izany,"aho tamin'ny farany dia namaly tamin'ny lazaina amin'ny teny."Dia mihevitra fa isika ihany ny fananana, fa tena tsy izy. Isika dia mila mandoa hetra mikasika izany isan-taona, na ny governemanta, dia handray izany."Ny ray aman-dreny vola dolara efa-jato isaky ny volana mba hanohizana ny fitazonana an-trano izy Ao Shina, dia manofa trano mandritra ny fito-polo taona, mandoa vita indray mandeha ny hetra eo aminy, ary avy eo dia mandoa na inona na inona intsony ny governemanta iray manontolo duration' ny tompony.
Ny Sinoa lease ny fananana na ny Amerikana manana ny fananana natao ho tsatòka mba ho azo antoka izy ireo handoa ny hetra.
Samy rafitra haninjitra ny faritry ny hevitry ny teny hoe"ny tompony."Wade Shepard dia ny mpanorina sy ny tonian-dahatsoratry ny Mpirenireny ny Diany.
Efa mandeha amin'izao tontolo izao nanomboka ny taona, amin'ny alalan'ny firenena. Izy no mpanoratra ny boky Masina Tanàna Shina, ary mandray anjara amin'ny The Guardian, Forbes, Bloomberg, Ny Masoivoho, ny South China Morning Post, sy ny boky hafa. Wade Shepard dia nanoratra lahatsoratra ao amin'ny Mpirenireny Dia. Contact ny mpanoratra. Nice lahatsoratra ary indray mandeha indray aho, dia nianatra zavatra. Tsy fantatro izany ny momba ny fananana trano ao Shina. Tiako ny fomba namintina azy: Sinoa ny olona hahazo ny fito-polo taona ny lease amin'ny fananany sy mandoa ny lease saram(aka hetra) aloha. Ny amerikana mahazo ny mandrakizay lease amin'ny fananany toy ny ela izy ireo handoa vola tsy mitsaha-mitombo ny lease saran'ny(aka ny hetra). Fisaorana Eny, izany no tena mahavariana. Eny ambonin'ny ANTSIKA kolontsaina rafitra ara-politika toa mamanala mifanohitra Shina, fa lalina teo izany tena be dia be toy izany koa. ANTSIKA ny olona mihevitra ry zareo maimaim-poana, miaina ao anatin'ny demokrasia, sy ny sisa raha ny vahoakan i Shina aza misahirana toy izany fitaka ha-ha. Mahatsikaiky fa dia ny fitoviana misy eo amin'ny firenena roa tonta izay mahatonga azy ireo mpifanandrina fa tsy toa ny fahasamihafana hita ka. Ny governemanta Foibe dia tsy ny"Federaly"ny governemanta.
Ny foibe ny fahefana dia be kokoa hifehy ny fiainan'ny olona noho ny ANTSIKA ny governemanta federaly.
Ny teny hoe"governemanta federaly"dia tsy natao fotsiny milaza fa ny Etazonia.
Ny andian-teny dia ampiasaina araka ny tokony ho izy, eto ny famaritana ny atao hoe:"Ny na mikasika ny endriky ny governemanta na ny firenena iray izay ny fahefana mizara roa ny iray foibe sy ny maro isam-paritra ny governemanta."Misy fahasamihafana goavana.
Nihevitra aho ny momba izany nandritra ny fotoana maharitra
Na ny marimarina kokoa, dia mety ho goavana be ny fahasamihafana. Tsy mahagaga raha ny lalàna dia mazava tahaka ny inona no mitranga rehefa afaka fito-polo taona. Ahoana anefa raha te-hivarotra ny efitra rehefa dimam-polo taona ny fampiasana. Dia olon-kafa mividy amby roa-polo taona lease na vaovao fito-polo taona ny lease. Mandoa ny hetra isam-bolana no tsy ratsy raha toa ka afaka manao ny tombom-barotra eo amin'ny trano, rehefa mivarotra izany. Fa ny mety ho ao Shina dia ny hoe tsy misy tombom-barotra, satria ianao ihany no afaka mivarotra ny sisa taona eo amin'ny lease ny fito-polo taona. Amin'ny zava-misy na dia izany aza anefa, ny ankamaroan ireo toerana ireo dia ho redeveloped mialoha ny lease dia up. Ary tamin'ny vintana intsony fa izy ireo tsy, misy maro ny hetra anjara.
Misy ny famindrana ny hetra izay nandoa rehefa fananana fiovana tanana mifototra amin'ny ny fivarotana vidiny.
Na izany aza, ny tena tany mihitsy no tsy efa ho toy ny sarobidy, indrindra fa amin'ny avo-hakitroky tarika. Mety te-handeha fizahana ara-pahasalamana natao inona ny tena"value"isan-sq. metatra any an-tanàna. Izany marina tsy izay rehetra be. Rehefa manana izany ho raraka nataon'ny olona an-jatony maro ary amin'ny lafin-javatra somary kely ny hetra, dia vitsivitsy arivo RMB ny fampiasana ny hetra ho an'ny hafa fitopolo taona. Izany no tsara tarehy be na inona na inona. Misaotra nanondro fa ny lease dia ho tany tsy an-tena vondrona ao an-trano. Izany no zava-dehibe ny fanavahana. Raha mijery hoe, tany Beijing ny varotra, dia mikapoka manodidina ny isan-toradroa m. Mampiasa ny mahazatra m fisaka, fa ny w, na izany aza, izany ny ho raraka avy na aiza na aiza avy dimy telo-polo gorodona mihevitra ho manana ho toy izany koa tany drafitra. Vokatry ny tany isan-karazany w. w isaky ny tompony. Mahazo somary sarotra kokoa ny fananana ny maro ny antoko maintsy mandoa vola, nefa izany tsy dia mandray loatra ny saina ny mieritreritra ny antonony vahaolana. Eritrereto aho dia handeha any ny mponina hifidy ny hetsika. Ho an'ny toeram-piompiana sy ny taona maro ny trano, fa maharitra ny fampiasana ny zo. Ireo izay ao amin'ny mazava doza, dia ireo manan-karena amin'ny raitra raha hitranga mba ho praiminisitra eo. iray mu ny tany rehetra ny tenany amin'ny villa eo an-tampony amin'ny ny tombany ny tany dia midika mafy w mandoa ny. Ny tsena fitsipika eto, tsotra toy izany. Manome amin'izao fotoana izao tompony voalohany mandeha ao amin ny tany, raha tsy izany, ny mpandraharaha mahazo mandeha izy. Ambonin'ny rafitra dia tsy voafetran'ny fotoana ny faneriterena raha mbola tsy rava na narenina be. araka izany, tsy misy fampandrosoana vokatry ny baomba mandatsa-midina midika onitra. toy izany no miasa amin'izao fotoana izao amin'ny fampandrosoana vaovao. Amim-pahatsorana aho mahita na inona na inona ratsy izany mihitsy, ny tany dia tokony tsy ho voaangona, taloha rafitra tokony havaozina sy redeveloped araka takiana. Rehefa dinihina tokoa, tsy misy zavatra toy izany ho"maharitra"na izany na tsy. Tsy misy ny mandeha ho voaroaka mba ny eny an-dalana ary namela tsy manan-kialofana. Tanteraka ny tranga ratsy indrindra, ny olona dia tsy maintsy miezaka mandoa ny somary tsotsotra vola mba hanavao ny tany anie izy. Isan-taona-mba-taona rafitra hetra dia kozatra tifitra penalty na izany na tsy. Mandoa izany indray mandeha, ary manana fiarovana. Ireo solomaso miaro amin'ny masoandro efa lasa ampahany amin'ny ahy, fa ny zavatra tsara dia tsy maintsy indray andro farany. Amin'ny manaraka iteration Lefy ny Andro.
Shinoa Mpisolovava, Shanghai Mpisolovava Fanompoana, Shina Lalàna Mafy
Ramatoa Li dia fito ambin'ny folo taona' traikefa amin'ny fomba fanao ara-dalàna
Izy dia manokana amin'ny varotra iraisam-pirenena, maritime lalàna raharaha, ny fampiasam-bola vahiny, ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ramatoa Mpankafy efa dimy taona traikefa amin'ny fomba fanao ara-dalàna.
Izy dia ny momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana izay mifandray amin'ny ara-dalàna ny raharaha, ny mpitantana ny orinasa sy ny asa lalàna. Mahafehy ny teny anglisy, mongoliana sy ny Mandarin Nuo Di dia iray amin'ireo voalohany Lalàna Orinasa ao Shanghai ao Shina mba hifantoka amin'ny iraisam-pirenena ny fanambadiana na fianakaviana ara-dalàna ny asa, ary efa nanangona mihoatra ny folo taona' ny traikefa eo amin'ny iraisam-pirenena ny fanambadiana, mialoha postnuptial fifanarahana, ny fisaraham-panambadiana fifanarahana, ny fisaraham-panambadiana-pitsarana, ny zanaka am-ponja, ny fanaovana tokantrano maso, ny herisetra an-tokantrano, lova, ny fizarana ny fananana, ny mpisolovava ny teni-vavolombelona ihany ny dia sy fankasitrahana ny vahiny fitsarana, sns. Ny fanokafana ny politika, bebe kokoa ny avy any ivelany ny talenta miasa any amin'ny orinasa Shinoa koa ny iraisam-pirenena ireo ary ny zo sy ny tombontsoa, dia ho voaro izany koa araka ny lalàna sy ny fitsipika. Isika dia manome asa fandoavam-bola bonus fifandirana fanapahan-kevitra, asa mifandray amin'ny fanelanelanana, ponenana ny fifanakalozan-kevitra sy ny asa fanelanelanana-pitsarana, sns. Manana fifandirana fanapahan-kevitra misahana ny ekipa za-draharaha amin'ny mpiara-miombon'antoka sy ny mpahay lalàna, izay ihany koa ny mpikambana ao amin professional komity ny toe-Karena, Sivily, ara-Bola ny Fandaniana Fifandirana, ny Asa sy ny fiahiana ara-Tsosialy. Ny asa manarona dingana rehetra-ny-pitsarana, anisan'izany ny pre-pitsarana, voalohany ohatra faharoa, retrial sy ny fampiharana ny lalàna amin'ny sivily, ara-toekarena, ny fananana ara-tsaina, heloka bevava, ny fitantanana sy ny an-trano-pitsarana sy ny mpanelanelana. Dia manoro hevitra amin'ny real estate purchase, leasing, famindrana, ny fananana ny fampandrosoana sy ny fitantanana ary koa manan-danja fifandirana ny fanapahan-kevitra. Mihoatra ny folo taona' zavatra any an-tsaha isika, dia hanampy anao misy dikany ny lalàna ao an-toerana, ary hanampy anao mba hamakivaky ny fahasarotan'ny ny tsena sy ny fanampiana mba hanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny manan-danja ny taova. Mpanjifa matoky antsika ny fitantanana ny intricacies ny varotra sy ny fifandirana, synthesizing ara-dalàna sy ara-barotra fahalalana ny manome azy torohevitra izay adika ho vokatra mahomby. Shanghai no Tatsinanana Pearl, ary bebe kokoa ny namany avy manerana izao tontolo izao tonga eto mba hanao raharaham-barotra, ny travel, ny asa na ny fianarana. Izahay dia mifototra amin'ny eto sy manana mihoatra noho ny folo taona' ny traikefa eo amin'ny fiatrehana isan-karazany ny vahiny mifandraika amin'ny fifanarahana, anisan'izany ny fifanarahana iraisam-pirenena kalesy ny entana, purchase fifanekena, fifanarahana ara-bola lease, asa fifanekena, fifanarahana findramam-bola, fifanarahana ho fananganana ny tetikasa, ny fifanarahana ny tenancy, famindrana teknolojia fifanarahana, sns. Afaka manome professional ara-dalàna ny fanompoana ny fandrafetana ny fanitsiana isan-karazany ny fifanarahana sy ny fiatrehana ny manan-danja ny fifandirana. Ao Shina, Takelaka Fanaovana tsinontsinona ny fifandirana dia manondro ny fifandirana hitsangana avy amin'ny fanitsakitsahana ny ara-dalàna momba ny zo sivily sy ny tombontsoa hafa, toy ny mitsikilo ny fananana ny zo manokana zo, ny fananana ara-tsaina zon'ny, lova ny zon'olombelona sy ny samy milaza. Afaka handamina ny fifamoivoizana loza, fifandirana, ara-pitsaboana takelaka, ny vokatra madio, internet fandikan-dalàna, ny biby fanafihana, fanjakana onitra, sns.
Ao shina ny Fandrosoana eo amin'ny Fananana ara-Tsaina Zon'ny (Eny, Tena) - Ny Diplaomaty
orinasa mbola mino izany tantara izany
Shina efa ela no hita ho toy ny"izao tontolo izao ny orinasa,"churning avy ambany-tsara ny entana vokarina ary manahaka ny vokatra sy ny fandraharahana modely avy any ivelanyNa dia noho ny mavesatra-polo governemanta na ny sasany ara-kolontsaina tohan-kevitra momba ny Confucian fanabeazana ny soatoavina, Shina, na mizotra izao ny tantara dia tany copycats tsy mahavita zava-baovao amin'ny tsy fanajana ny fananana ara-tsaina zon'ny (IPR). s. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Amerikana Antenimieran'ny Varotra ao Shina, mpikambana ao amin'ny orinasa no nizara ny fomba fijeriny ao Shina IPR ny lalàna sy ny fitsipika na izany aza, mihoatra noho ny antsasaky ny namaly no mbola tena resy lahatra fa ny lalàna fiarovana ny fanànana ara-tsaina dia ho araka ny tokony ho ampiharina ao Shina. Orinasa vahiny efa ela no nitaraina fa ny fampiharana ny fananana ara-tsaina zon'ny ao Shina dia sarotra noho ny eo an-toerana ara-pitsarana protectionism, olana eo amin'ny fahazoana ny porofo, kely ny fahasimbana ny loka, sy ny fahitana azy ireo fitongilanana manohitra ny orinasa vahiny. Na izany aza, tato anatin'ny folo taona, Shina dia lasa miha-zava-baovao sy efa nanao hetsika lehibe ho tapa-kevitra ny hanamafy ny mahomby IPR fitondrana. Eny tokoa, araka ny orinasa Shinoa mifantoka amin'ny global fanitarana any ivelany sy ny teknolojia avo-zava-baovao ao an-trano, dia efa miha nangataka mahomby IP fiarovana avy amin'ny governemanta. Raha ny tena izy, maro ny ahiahin'ny vahiny orinasa miasa ao Shina no miantefa amin'ny ara-dalàna ny fanavaozana sy ny fampiharana ny lalàna vaovao ny rafitra. Iray amin'ireo lehibe ny fitarainana takin'ny manohitra an'i Shina ny IPR fitondrana dia izay toe-javatra nitondra ny-kafa fitsarana (amin'ny monisipaly ambaratonga) dia mijaly ao an-toerana ara-pitsarana protectionism.
ary nandidy voampanga Hengbao Co, Ltd
Lava sy Wang hita ao amin'ny fianarana izay ao IP toe-javatra eo amin'ny orinasa Shinoa, ny mpitory teo anatrehan'ny fitsaràna litigating tao amin'ny tanàna niaviany dia be kokoa ny handresy.
Na izany aza, izy ireo ihany koa ny nahita fa raha ny toe-javatra dia niantso ny fitsarana ambony (eny anivon'ny faritany), mpitory toerana tsy manana fiantraikany lehibe momba ny raharaha vokatra.
Araka ny famintinana ao amin'ny taratasy fotsy avy amin'ny Faratampony ny Olona ny Fitsarana, Shina, no naka ny dingana manan-danja mba hanafoanana ny eo an-toerana ara-pitsarana protectionism sy ny antoka ara-drariny adjudication dingana ao IP toe-javatra. Tamin'ny oktobra, ny Faratampony ny Olona ny Fitsarana dia nametraka ny Fananana ara-Tsaina Fizarana ny maso-pirenena toe-javatra. Amin'ny, any Beijing, Shanghai ary Guangzhou nanangana ny fananana ara-tsaina ny fitsarana. Tany am-piandohan'ny taona, Nanjing, Suzhou, Chengdu, ary Wuhan nanomboka manokana ny fananana ara-tsaina fitsarana. Satria ireo fitsarana no ohatra voalohany fahefana rehetra IP toe-javatra ao amin'ny tsirairay amin'ny faritany, tsy dia ny vokany ratsy eo an-toerana protectionism ho mitigated kokoa amin'ny fomba maty paika amin'ny alalan'ny fanesorana ny toe-javatra avy ao an-toerana ny fahefana, fa ny fitsarana dia ho afaka ihany koa ny manome tsara kokoa ny mpitsara sy ara-teknika ny naman'ny fiangonana niaraka tamin'ny ilaina fahaizana mba hiatrehana ny maha sarotra ny caseloads. Izany dia azo antoka fa na ao an-toerana sy avy any ivelany litigants hahazo fitsaboana ara-drariny. Mba tsara litigate fananana ara-tsaina toe-javatra, IP mpihazona mila porofo. Any ny United States, ny antoko matetika hahazo ny vaovao amin'ny alalan'ny mialoha ny fitsarana fomba fahitana, izay ahitana interrogatories sy depositions, ary koa ny fangatahana for admissions sy ny fidirana tahirin-kevitra, ny fananan-tany, na ny manan-danja hafa ny zavatra ho famerenana na ny fizahan-toetra. Ao Shina, amin'ny lafiny iray hafa, tsy misy ara-dalàna ny fizotry ny nahitana misy, ary tsy misy fitakiana izay IP infringers manome porofo, toy ny varotra na ny fitantanam-bola tahirin-kevitra, fa mety ho ampiasaina mba hanehoana ny fandikan-dalàna. Raha ny marina, ny enta-mavesatra mba hanome ny porofo dia ny mpitory. Maro ireo orinasa efa nilaza fa izany no mahatonga azy tsy ho vita ny fitondran-tena ara-drariny IP mampifanditra ao Shina. Mahaliana, Andininy faha-dimy amby enim-polo ao Shina ny an-trano Dingana Lalàna milaza hoe,"Ny olona ny fitsarana dia izy no hanana ny fahefana mba hahazo ny porofo avy amin'ny manan-danja ny vondrona na olo-tsotra, sy ny toy izany vondrona na ny olona, mety mandà tsy hanome ny porofo."Ny fahafahana subpoena rakitsoratra dia hypothetically hanalefahana ny tsy fahampian'ny ofisialy nahitana dingana, fa hatramin'ny vao haingana dia tsy mbola be hampiharina. Amin'ny, na izany aza, ny Faratampony ny Olona ny Fitsarana hampahafantarana vaovao hevitry ny Sivily ny Fomba Lalàna, izay, araka ny Andininy faha- momba ny heviny, dia mamela ny antoko iray ny fangatahana, izay ny didim-pitsarana ny antoko mpanohitra mba hamokatra manokana fanadihadiana porofo fa dia eo ambany ny antoko hafa ny fanaraha-maso. Ity heviny dia"mamporisika ny fangatahana ho amin'ny famokarana ny kaonty, ny firaketana an-tsoratra, ary ny boky, toy ny mpitsara dia manana olana amin'ny araka ny tokony ho fanombanana ny fahavoazana"ary mamorona ara-drariny ny dingana ny fahazoana ny vaovao. Vaovao ireo fanazavana ny hevitry ny porofo dia hanampy ihany koa amin'ny olana ny fahasimbana ny loka. Orinasa maro no nitaraina fa nanenjika ny fananana ara-tsaina toe-javatra amin'ny teny Sinoa fitsarana dia tsy mendrika noho ny fahavoazana nahazo kely loatra. Nilaza ny tombatombana sasany milaza fa patent mpihazona ny amin'izao fotoana izao ny mahazo manodidina ny telo-polo amby enin-jato ny onitra tadiaviny-pitsarana, miaraka amin'ny fahasimbana ny loka salan'isa manodidina fotsiny, RMB (dolara) sy ara-dalàna ny saram-eo, RMB sy, RMB (dolara, mba dolara). Na izany aza, ny volana jolay lasa teo am-Pirenena ara-Bola ny Asa Fihaonambe, ny Filoha Xi Jinping nanambara fa i Shina"tsy maintsy hampiasana ny ezaka mba manasazy ny tsy ara-dalàna fandikan-dalàna ny fananana ara-tsaina ny zo sy ny hery infringers mandoa mavesatra price."Izany no hita taratra ao amin'ny tolo-kevitra politika hanova ny fahefatra Patent Lalàna fanitsiana, izay mbola eo ambany review. Ny famerana ny fahavoazana mety hampitombo avy amin'ny ambaratonga amin'izao fotoana izao, eo anelanelan'ny, RMB ny iray tapitrisa RMB (dolara, mba dolara), ho eo amin'ny, RMB sy dimy tapitrisa RMB (dolara, ny dolara. Mifanaraka amin'ny politika ity tanjona avy any Shina, ny mpitarika ambony, ny fitsarana koa efa nanao ezaka mba hampitomboana ny fahavoazana mba hiarovana ny fanànana ara-tsaina ao ny didy. Amin'ny taona, ny Beijing IP Fitsarana hita ao amin'ny famindram-po ny mpitory Watchdata Rafitra Co, Ltd. mandoa amby sivy tapitrisa RMB amin'ny onitra noho ny fanaovana tsinontsinona patent miampy iray tapitrisa RMB any ara-dalàna ny saram (ho tanteraka ny dolara. Toy izany koa nanan-tantara fandresena amin'ny fiarovana ny IP ahitana ny famantarana ny fandikan-dalàna eo amin'ny fitondrana fa nanome baiko ny telo Shinoa shoemakers ny handoa ny Fifandanjana Vaovao folo tapitrisa RMB (dolara. dimy tapitrisa) ho an'ny kopia New Balance ny famantarana sy ny zon'ny mpamorona fandikan-dalàna eo amin'ny fitondrana fa nanome baiko Baofeng Teknolojia mba handoavana ny enina tapitrisa RMB (dolara) Tencent fa tsy ara-dalàna nirohotra enina fizarana Ny Feon i Shina. Ireo toe-javatra rehetra manaraka ny jeneraly fironana amin'ny fampitomboana ny fahasimbana ny loka ao IP-pitsarana.
Raha ny marina, ny eo ho eo ny fahavoazana nahazo ny loka ho an'ny patent fandikan-dalàna ao Beijing IP Fitsarana nitombo mihoatra ny telo heny avy amin'ny, RMB (dolara ho) amin'ny.
efatra tapitrisa RMB (dolara) amin'ny taona. Famantarana fandikan-dalàna ny toe-javatra ankehitriny, jereo eo ho eo ny fahavoazana maneran. fito tapitrisa RMB (dolara) sy ny zon'ny mpamorona jereo ny toe-javatra mari-pankasitrahana fa eo ho eo, RMB (dolara). Farany, ny tady ny avo lenta ny famoizana olon-tiana ny mba somary tsy fantatra orinasa Shinoa tamin'ny fanaovana tsinontsinona patent toe-javatra amin'ny alalan'ny orinasa toy ny Paoma, Samsung, Sony, ary Dell efa resy lahatra ny mpanara-baovao maro fa tsy misy azo atao ho an'ny orinasa vahiny mba hahazoana ara-drariny ny mianjera ao Shina ny fitsarana. Na dia izany aza, ireo matotra izany toe-javatra mora ny fahadisoana ny olona, satria ny voalamina.
Amin'ny zava-misy, ny orinasa vahiny saran-dalana ihany koa amin'ny fampiharana IP zo amin'ny fizahan-toetra maha-tsy miankina-tompon'ny orinasa Shinoa.
Ny fianarana ny Fitiavana, Helmers, ary Eberhardt hita fa teo anelanelan'ny taona sy, ny orinasa vahiny nitondra mihoatra ny folo isan-jaton'ny patent fandikan-dalàna ny toe-javatra ao Shina ary nahazo ny fitopolo isan-jato amin'ireo toe-javatra. Amin'izao fotoana izao, handresy ny tahan'ny eo ho eo amin'ny manodidina ny isan-jato sy ny didy ny tahan'ny eo ho eo amin'ny manodidina ny isan-jato. Amin'ny isa ireo, dia tsy mahagaga raha Sina mitombo hatrany ny ho voafantina ho toy ny fifanakalozan-kevitra ny safidy ho an'ny tsy orinasa Shinoa ny litigate IP fifandirana. Eo amin'ny lafiny politika, dia vao tamin'ny volana lasa, Shina vita ny efa-bolana manerana ny firenena ny fampielezan-kevitra narindra manerana ny roa ambin'ny folo governemanta ny sampan-draharaha miaro ny IP zo ny orinasa vahiny.
Ny fanantenana dia ny fampielezan-kevitra dia hanatsara ny fiaraha-miasa eo IP fampiharana ny faty, hanangana feo tontolo iainana ho an'ny mpampiasa vola vahiny, ary ny hanakana ho avy ny fanitsakitsahana ny vahiny IP.
Raha ny sasany milaza fa ny eto an-toerana ara-politika faneren'ny hisorohana ny Shina avy manao manan-danja ara-dalàna ny fiovana, Shina, dia efa nirotsaka amin'ny asa sarotra ny fanavaozana ny IPR fitondrana.
Eny tokoa, ao an-toerana ny fangatahana dia nanao izany tena ilaina.
Tsy manana Shina fanavaozana ny IP lalàna hanitarana ekena ny porofo sy hampitombo ny fahavoazana ho an'ny fandikan-dalàna, kanefa manana ihany koa ny fanavaozana ny rafitra ara-dalàna sy ny fampiharana ny politika vaovao mba hamerana ny mety hisian'ny protectionism sy ny fitongilanana manohitra ny vahiny litigants. Raha ny rafitra dia tsy lavorary, ny fiantraikan'ny ireo fanovana dia tsy tokony ho understated. Ireo fiovana ireo dia misolo tena tsara malaza ao Shina ny ara-tontolo iainana sy araka ny lalàna manohy mikolokolo zava-baovao ao an-toerana, ny orinasa vahiny tsy miraharaha izany fandrosoana amin'ny ny mety. William Weightman dia - Fulbright Mpiara-monina tao Chengdu, Shina, izay fikarohana ny fananana ara-tsaina lalàna, IP fampiharana ny lalàna, sy ny teknolojia fanavaozana politika. Ankafizo feno ny fidirana amin'ny vohikala sy hahazo ny mandeha ho azy ny famandrihana ny gazety amin'ny Masoivoho Rehetra-ny Fidirana amin'ny ny famandrihana.
Ny Zo Visa ho an'ny Fiofanana any Shina Torohevitra araka ny Lalàna Shina Internship Fametrahana Blog
Marina izany, indrindra amin'ny fotoana feno asa tolotra
raha ny marina, tsy dia hoe sarotra, indrindra fa raha ianao handeha hamaky ny CIP SehatraNa izany aza, Shina mitaky ny ankamaroan'ny ny olom-pirenena mba hahazoana. Visa fitsipika dia miova foana, ary ny sampan-draharaha isan-karazany dia hilaza aminareo isan-karazany ny fahamarinana, ka eto izahay hanome anao indray mitopy maso ny azo atao visa mety ho hita, na mety fihaonana, nandritra ny mihoatra ny folo taona miasa ao amin'ny orinasa tahaka ny mpila ravinahitra, efa za-draharaha maro visa fiovana politika ary afaka milaza aho fa ny Governemanta Shinoa dia hentitra ny fitsipika visa, ary dia hanasazy misy ny fanitsakitsahana izany.
Amin'ny fiakaran'ny ao Shina ny fahefana ara-toekarena, ny Fiofanana efa lasa ny varavarankely mba hiaina ny fanjakana Fahiny izany avy amin'ny fomba fijery manokana.
Tanora maro no manana diplaoma sy ny oniversite ny mpianatra dia te-hahita an'i Shina mba hahatakatra ny zavatra tsy maintsy manolotra. Ny fikirizana dia hiposaka ao amin'ny, olon-dehibe ihany koa dia efa naka ny liana ny asa sy fanorenana ny asa. Noho izany dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fitsipika mifehy miditra, monina sy ara-dalàna mitoetra ao Shina Raha toa ianao ka mieritreritra interning ao Shina, tsy mila miahiahy momba ny fiarovana ny zo visa noho ny asa sy foana misisika amin'ny fahazoana ny tsara sokajy ity. Tsy zava-miafina izany fa ny Fiarovana ny Vahoaka Buraex manampahefana mahalana vao mitsidika toeram-piasana mba hitarika ny fahazarana nandinika indrindra taorian'ny. Ny fahavaratra ny taona, Shanghai efa goavana nandinika sy orinasa sasany dia voasazy handoa onitra.
Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hahatakatra ny zavatra ilaina sy ny visa dingana fampiharana.
Ny Fiofanana any Shina Visa, hoy aho no mora ny mahazo ny, raha toa ianao mahazo tsara ny andrim-panjakana mba hanampy anao amin'ny alalan'ny izany rehetra izany Indray amin ny andro (talohan'ny taona), mpitsidika F-visa hamela nandritra ny enim-bolana internship, nandoa na tsy nandoa vola. Na izany aza, amin'izao fotoana izao ny teny famelana ny mpianatra intern efa nesorina, ary izany dia ho lasa volon-davenona ny faritra. Raha ny marina, ny F-ny fahazoan-dàlana dia sokajiana ho tsy ara-barotra"fitsidihana, fifanakalozana, fisafoana, sns.", nanolo-kevitra ny manam-pahaizana nasaina ho tsy ara-barotra fihaonambe, fifanakalozana ara-kolotsaina, fanadihadiana, ara-tsiansa sy teknolojika ny fanabeazana tours, na ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny ara-pahasalamana hafa ny asa. Ny F-visa angamba tokony tsy ho ampiasaina ho an'ny internships, izay mety ho antony maro mpangataka ny fampiharana ny fiofanana dia efa nanana ny F-ny fahazoan-dàlana fangatahana lavina. Na izany aza, satria tsy misy ofisialy"internship visa"ary na aiza na aiza no tanteraka ny toetry ny F-ny fahazoan-dàlana dia afaka ny ho ampiasaina ho internship fa Shina visa sokajy F (F-"visa") dia mbola nanatitra ny mpianatra asa ao Shina ny sasany Internship mpanome tolotra. F-ny fahazoan-dàlana no tsara indrindra nangataka, raha te ho mpilatsaka an-tsitrapo tsy misy onitra. Tena kely ny fikambanana izay tsy manana lalàna sy ny fanajana ny sampan-draharaha mety hamela izany, fa aoka ny intern"tandremo"Ny matetika indrindra dia nanolotra internship visa dia ny raharaham-barotra M-visa, izay tsy mamela ny asa mba ho karama noho ny asa na izay mety ho endriky ny onitra.
Tamin'ny fomba ofisialy ny, ny M-"visa"ihany fa"ny varotra na ara-barotra", izay no antony tsy dia tena ao anatin'ny fotoana fohy ary izany dia mitaky ny fivoahana sy ny fidirana isan, na andro.
Voatery handao ny firenena sy ny hiditra indray Shina be afaka mampitombo ny vola lany ny internship, arakaraka ny toerana misy anao intern.
Ohatra, raha toa ianao nanomboka tany Beijing, ary tsy maintsy manavao ny fahazoan-dàlana ao Hong Kong, mety mandany eo amin'ny RMB, ho an'ny weekday visa mihazakazaka (fanamarihana: tsy maintsy mandray farafahakeliny iray andro tsy iasana), fa raha toa ka nipetraka any Shenzhen, ianao dia mbola mila, fara fahakeliny, ny andro tsy iasana, fa angamba mety ho afa-maina amin'ny latsaky ny RMB.
Na ny M-"visa"ho an'ny raharaham-barotra ny varotra sy ny varotra, ary na aiza na aiza no tanteraka ny fanjakana fa ny M-visa azo ampiasaina ho internship, fa Shina visa sokajy M (M-"visa") dia mbola matetika indrindra nanolotra visa mpianatra any Shina. Ny antony sasany internship mpamatsy tsy hanaja lalàna ny olona mba mbola manome ny raharaham-barotra"visa"noho izany ny fandaniana azy na inona na inona. Fa toy ny intern, dia tokony ho momba ny maha-ara-dalàna ny hijanona momba ny zavatra ataonao ao Shina. Tsy maintsy ho avy ny fanirian-daza ao Shina, noho izany ny tokony ho malina. Dia ho fandoavana ny fandaharana saram ka ho azo antoka ny sampan-draharaha manome anao ny tsara visa izay amin'ity tranga ity ny sokajy X izay voalaza ao amin'ny manaraka ireo andinin-tsoratra roa Maro ny orinasa dia manolotra ny toerana, saingy mitaky ny kandida hiditra ao Shina amin'ny mpizaha tany visa voalohany amin'ny ny teny fikasana ny manova izany ny asa visa, na hafa araka ny tokony ho visa, taty aoriana. Na izany aza, tsarovy fa izany no tanteraka tsy ara-dalàna-miasa amin'ny fizahan-tany L-"visa"(tsy misy faritra fotsy mihitsy), ary raha toa ka mba raiso ny sampan-draharaha na ny orinasa ny jono, misy dia tena tsy misy antoka fa ianareo dia tsy manana ny zon'ny mpiasa. Ny voka-miasa amin'ny fizahan-tany visa mety ho ny mpampiasa izay tsy mety mandoa ny karama, miova ny fepetran'ny asa izany, na ny karama be, na hafa mifanohitra amin'ny toe-tsaina hanova zavatra izany satria ny orinasa mahafantatra fa ianao tsy manana ny zon'ny mpiasa rehefa ianao no miasa tsy ara-dalàna. Ankoatra izany, izy ireo mahalala fa ny anao dia tsy ny tatitra azy ireo na iza na iza, satria ny asa tsy ara-dalàna ianao dia mandray anjara amin'ny fitondran-tena mampidi-doza izay mety hiafara amin'ny mitana onitra na fandroahana. Ny fahasamihafana eo amin'ny X-"visa"(matetika dia rava ny X ary X) sy ny F-ny fahazoan-dàlana dia X-visa mpianatra mila manana anarana hipetraka. Ny mpianatra izay mianatra any Shina amin'ny oniversite momba ny X-fahazoan-dàlana dia mahazo mba hanao ny fiofanana sy ny asa hafa toy ny ela izy ireo no nanaiky internship fampiharana ny sekoly sy nahazo fankatoavana. Izy ireo dia hitondra fa ny fankatoavana ny taratasy eo an-toerana Fidirana sy Fivoahana amin'ny birao ny Vahoaka amin'ny Birao misahana ny Fiarovana sy ny fanavaozana ny trano fonenana ny fahazoan-dalana amin'ny tsipiriany momba ny vaovao ny mpampiasa, toy ny orinasa anarana, toerana, sy ny asa ny halavany. Ny X Visa mamela hijanona hatramin'ny herintaona ary azo navoakan'ny oniversite amin'ny JW. Ny X Visa matetika dia namoaka ny mpianatra izay hijanona ao Shina mandritra ny enim-bolana.
Ny ankamaroan'ny fikambanana tia X ho an'ny fiofanana
Ny X visa azo omena raha any amin'ny tanibe Shina.
Toe-javatra sasany dia mety mitaky ny mpianatra no mandeha any Hong Kong mba hanitatra. Ny orinasa toy ny Benz, Audi, Marriot trano fandraisam-Bahiny, ary ny hafa Harena diman-jato fikambanana amin'ny ara-dalàna sy ny fanarahana ny sampan-draharahan'ny dia manaiky fotsiny X visa. Toy ny tamin'ny fiandohan'ny taona, ny hany nekena visa ho internship no X sokajy ity. Ny lalàna dia mazava momba ny zavatra takiana mba hahazoana ireo mpianatra asa ara-dalàna nanao sonia. Izany dia lany vola ianao mba hahazo ny mpijery ny tsara ny andrim-panjakana mba hanome anao ny tsara visa fa tsy mety ny ho avy ao Shina ny ratsy visa S-"visa"ho an'ny havana ny vahiny monina sy miasa ao Shina, toy ny tanatin ny mpivady sy ny mitsidika ray aman-dreny. Ny fahazoan-dàlana dia afaka ny ara-dalàna ihany no azo omena ny havana Z sy X visa mpihazona, fa ny orinasa ao Beijing Zhongguancun Science Park mamela ny vahiny rehetra mpianatry ny oniversite ny fianarana any Beijing mba hamita ny fiofanana amin'ny S visa hatramin'ny S (fohy) no visa loosely nofaritana ho toy ny"raharaha manokana". Raha mila antsipirihany lisitry ny visa, Shina ny olana ankoatra ny zavatra resahina eto, mba jereo visa politika ao amin'ny tranonkala ny Mitandrina ao an-tsaina fa na inona na inona visa karazana, tsy nandoa ny fiofanana dia ho toy ny ara-dalàna satria izy ireo dia any Etazonia sy ny hafa firenena. Marihina fa isan-tanàna dia mety samy manana ny toro-lalana sy sasany tech mifantoka bebe kokoa vahiny-namana politika. Raha izy ireo no handefa ny fahazoan-dàlana antontan-taratasy amin'ny alalan'ny mailaka Ny zo internship visa tany am-boalohany dia mitaky ny antontan-taratasy izay midika hoe tsy maintsy ho voavonjy ny alalan ny voasoratra mail (DHL na FedEx) fa tsy noho ny mailaka ho anareo mba atao pirinty. Izany dia midika fanatitra izy ireo dia tsy ara-dalàna visa. manome fiofanana visa ho anao Izany fandaminana, ianao kosa rehefa nanao Raharaham-barotra ny Visa sy ny lehibe izany dia ny saina mena. Izy ireo handefa anareo fanasana taratasy amin'ny alalan'ny mailaka anisan'izany ny scanned ny Dika mitovin'ny KARA-panondro ny karatra Sinoa olom-Pirenena: - Izany dia midika ianao hahazo ny visa mpizahatany ary tokony handà izany tsotra izao. Ny internship visa tokony ho tohanan'ny an-pampianarana.
Midika izany antontan-taratasy rehetra dia avy aminy noho ny governemantan'i Shina no manana ara-dalàna nomena ireo hery ho azy ireo.
Tamin'ny nahatongavany, dia tokony hitsidika ny Vahoaka mba hamita ny fisoratana anarana sy ny fomba ofisialy ho mendrika ny intern ao Shina. Dika mitovy ny taratasy Fanamarinana avy amin'ny Ministeran'ny Fanabeazana (avy amin'ny mena hajia). Ity tahirin-kevitra ity dia mamela ny Andrim-panjakana mba hamoaka ny visa sy ny firaketana an-tsoratra. Taratasy fanamarinana momba ny fampitambarana (tsy maintsy any amin'ny firenena rehetra. Any amin'ny Masoivoho shinoa any amin'ny Firenena tandrefana dia tsy mitaky izany) ary Hametraka ny visa antontan-taratasy any amin'ny Masoivoho Shinoa ao amin'ny firenena. Fa ianao aloha ny rehetra dia mila ny toerana misy ny fanekena ny birao.
Ity no ara-dalàna ny dingana fampiharana, fa i Shina dia ny fanjakana masi-mandidy noho izany tahirin ny zo mba hitovy ity dingana ity.
Rehetra izany no ilainao dia ny hahafantatra ny zavatra fanampiny ambaratonga vaovao takiana sy manao zavatra mifanaraka amin'izany.
Izany dingana izany dia tsy hisolo ny toe-draharaha ao amin'ny firenena.
Mahazo mifandray amin'ny ny sampan-draharahan'ny misahana ny Visa-hahazo an-tsipiriany ny tari-dalana Isika, dia afaka manampy anao azo antoka ny zo visa taorian'ny fahazoana ny toe-draharaha sy ny ao amin'ny fanarahana ny fitsipika. Mety mifandray amintsika amin'ny alalan'ny CIP dia manome fiofanana amin'ny asa sy ny fianarana any ivelany fahafahana. Izahay nanoratra ny lahatsoratra, satria misy maro ireo fanontaniana tsy nahitam-baliny. Efa nanangona ny fanao sy ny valiny avy amin'ny mpanoro-hevitra ara-dalàna mba hametraka izany miaraka. Tahaka ny lalàna manova, dia afaka manao fanovana fa tsy mendrika ho tara ny vaovao farany efa nanatona ny mafy ho an'ny asa mandritra ny faharetan'ny enim-bolana. Na izany aza, te ahy, dia ny hanangona ny vaovao ilaina ny Shinoa Visa. Aho ny mpianatry ny oniversite Indiana Zom-pirenena ary efa enim-bolana internship ho toy ny ampahany amin ny oniversite ny fandaharam-pianarana. Aho te-hahafantatra ny karazana fahazoan-dàlana aho, dia tokony hahazo izany karazana asa. Raha ny Fiofanana any Shina, avy eo dia mila X visa.
Ireo karazana fahazoan-dàlana dia navoakan'ny toeram-Pampianarana.
Raha toa ka mila fanampiana amin'ny fampiharana ny X visa, dia afaka manampy anao. Mba mailaka ny ekipa amin'ny alalan'ny mailaka ity katsaram-Panahy hanamarina ny inbox, efa namaly ny fangataham-panazavana. Hiverina any aminay raha toa ianao manana fanontaniana hafa sy ny ofisialy kaonty WeChat no"Asa"Misaotra anao noho ny maika io olana io ho any an-tsipiriany, iray amin'ireo namako nosamborina tao Shanghai tamin'ny volana aogositra taona. Izy no nanatevin-daharana ny fiofanana fandaharana amin'ny iray amin'ireo Sampan-draharaha izay birao dia any ANGLETERA. Nosamborina izy noho ny fampiasana ny Raharaham-barotra Visa noho ny asa.
Rehefa nanaraka ny raharaha, ny polisy izay nilaza taminay fa ny hany X visa (mpianatra) dia azo ampiasaina ho toy ny tanjona, ary izy no mahafantatra ny sasany crook ny sampan-draharaha manampy hahafantaran'ny Mpianatra manao ireo heloka ireo.
Famoahana pasipaoro ara-teknika, extracts ny momba ny voalohany ny fisoratana anarana ny tompon'ny zo amin'ny trano - Famoahana ny extracts, pasipaoro ara-teknika momba ny voalohany sy ny famerenana indray ny fisoratana anarana ny tompon'ny zo amin'ny trano - Fisoratana anarana ny asa momba ny tena toetrany
Panjakàna herin 'ny mpampanoa lalàna, raha ny fampiharana dia nametraka amin'ny olona hafa amin'ny anaran'ny tsara mpihazona (ara-dalàna amin'ny olona ny fampiharana sy ny solontena ny herin' ny mpampanoa lalàna dia tokony ho raisina ho mpikambana amin'ny alalan'ny ara-dalàna ny olona iray ny tombo-kase) · Fanapahan-kevitry ny fihaonambe ny mpikambana ao amin'ny trano-trano fiaraha-miasa amin'ny fanomezana ny toeram-ponenana faritra ny fanorenana ny trano-trano fiaraha-miasa (ABC) Manaraka ny antontan-taratasy tokony ho atolotra araka ny Lalàna"tsy miankina ny trano tahirim-bola ao amin'ny Repoblika Azerbaijan, raha trano heverina privatize an'ny fanjakana na ara-tsosialy trano tahirim-bola: - Fampiharana ny olona iray izay efa tonga ny valo ambin'ny folo taona ny miara-mipetraka amin'ny mpangataka manana zo amin'ny trano momba ny ny fanekena ho an'ny tsy miankina ny trano, na ny fampiharana ny rightsholders mifandray amin'ny vonjimaika ny hetsika ho amin'ny toerana iray hafa - ny Fampiharana ny trano-fikojakojana ny fikambanana amin'ny olona manana zo ny toeram-ponenana faritra (trano) sy ny fahadiovana ny toe-trano (Endrika Tsy:) - Mba ny ny trano fonenana amin'ny faritra (Rakitry ny boky dia namoaka tsy taty aoriana noho ny folo andro amin'ny alalan'ny manan-panjakana fikambanana raha lamin ny trano fonenana amin'ny faritra dia very na lasa tsy misy ilàna azy) Toetry ny fisoratana anarana ny zon'olombelona any an-trano dia natao mifototra amin'ny fampiharana napetraky ny olona nahazo azy azy, na alefa amin'ny alalan'ny notaryOlona ny farany anarany, anarana, patronymic anarana, ny adiresy, ny famantarana ny tahirin-kevitra, ara-dalàna ny olona iray ny anarana, ny adiresy, ny taratasy fanamarinana ny amin'ny fisoratana anarana, ny anarana sy ny adiresy ny fahefana mpanatanteraka, ny afa-po ny amin'ny fanangonan-tsonia sy ampiarahina amin'ny antontan-taratasy dia tokony ho voalaza ao amin'ny fangatahana. telo-polo AZN (Raha navoaka ho roa-polo andro, roa-polo AZN fanompoana saran'ny (s f) Raha navoaka ho efatra ambin'ny folo andro, ny telo-polo AZN s f tao Baku, Ganja, Sumgait tanàna ary Abs heron faritra raha namoaka mandritra ny fito andro, dia efa-polo AZN s f raha navoaka ho efatra ambin'ny folo andro tany an-tanàna hafa na any amin'ny distrika, dia roa-polo amby enin-AZN s f raha namoaka mandritra ny fito andro, dia telo-polo AZN s f.) Panjakàna fifanarahana tokony ho azo atolotra ho an'ny trano ao tenement trano naorina eo amin'ny ara-dalàna ny olona iray na olona iray raha tsy misy fametrahana ABC. Fangatahana natolotry ny mpikambana ao amin'ny trano fanorenana fiaraha-miasa ho an'ny fanjakana ny fisoratana anarana ny zo ekena raha misy manana vaovao ao amin'ny data base-Panjakana misahana ny Fananana Olana momba ny commissioning ny trano naorina ny trano fanorenana fiaraha-miasa. Antontan-taratasy manamarina ny fisian'ny zo, ny fividianana, ny fizarana izany amin'ny olon-kafa, ny famerana (entana), ary ny famaranana dia tokony ho manan-danja ny fepetra araka izay voalaza ao amin'ny lalàna ho an'ny fanjakana ny fisoratana anarana ny zon'olombelona. Ao anatiny dia tokony ho voasoratra mazava tsara ao amin'ny nanolotra ny antontan-taratasy, ny olona ara-dalàna' ary ny olona tsirairay ny anaran' tokony ho voalaza ao amin'ny feno. Rava, teny nanampy taty aoriana, voafafa sy tsy voamarina ny maha-azo itokiana ny hafa fanitsiana, ary koa ny simba ny antontan-taratasy amin'ny mazava afa-po dia tsy nanaiky ho an'ny fanjakana ny fisoratana anarana ny zon'olombelona. Endriky ny fananana sy ny format manan-tompo hafa zo sy ny famindrana ny olona hafa no formalized amin'ny nalaina avy amin'ny fanjakana fisoratana anarana mifototra amin'ny tahirin-kevitra vonona tamin'ny manan-danja fahefana mpanatanteraka. Ny olona, izay manana zo privatize trano-panjakana ny trano fonenana tahirim-bola, ny miaro ny zony amin'ny alalan'ny ny daty Trano Fehezan-dalàna ny Repoblikan'i Azerbaijan napetraka ho fanaovan-dalàna araka ny Lalàna momba ny"Tsy miankina ny fanjakana trano tahirim-bola ao amin'ny Repoblika Azerbaijan"mitondra ny datin tamin'ny faha- janoary. Ny Lalàn 'ny Repoblika Azerbaijan mitondra ny datin' ny faha- janoary mikasika ny"Tsy miankina ny trano tahirim-bola ao amin'ny Repoblika Azerbaijan"dia tsy mihatra amin'ny toeram-ponenana faritra ara-tsosialy sy manokana notendren'ny fanjakana ny trano fonenana tahirim-bola omena ny olom-pirenena araka ny III ary IV fizarana ny Fehezan-dalàna (sosialy, nanofa toeram-ponenana faritra, manokana notendren'ny trano tahirim-bola) taorian'ny fametrahana amin ny lalàna ny Trano Fehezan-dalàna. Famoahana ny didy taty aoriana noho ny datin'ny oktobra, ny taona no tsy nanaiky ho mifanohitra amin'ny fepetra ny trano ny lalàna eo amin'ny fitondrana Tsy miankina trano (sy ny asa fanompoana an-trano) dia tsy azo atao ao amin'ny toeram-pianarana ny fanabeazana ny andrim-panjakana, simba ny trano, an-trano ny tafahitsoka miaramila an-tanàna. Toeram-ponenana ny faritra ao amin'ny tobim-pianarana dia mety ho tsy miankina ihany no mponina miaina amin'izao fotoana izao misy ary manana ny fanofana fifanarahana amin'ny tompon-trano tahirim-bola rehefa avy nanome ny tobim-pianarana ao amin'ny fanjakana ny fananany ao an-toerana ny fahefana mpanatanteraka araka ny fanapahan-kevitry ny Minisitra ny Kabinetra ny Repoblika Azerbaijan.
Ny manan-danja fahefana mpanatanteraka mandà ny figiazana ny trano fonenana raha toa ny olom-pirenena ankehitriny sandoka antontan-taratasy na ny trano fonenana dia mampiady hevitra. Amin'ny toe-javatra ireo, ny fampahafantarana manan-kery momba ny fandavan'ny fanjakana fisoratana anarana ny tompony marina dia naniraka ny mpangataka ao anatin'ny dimy andro roa ambin ny folo AZN fanompoana saran'ny dia raisina raha toa ka ny fitambaran'ny faritra tsy miankina trano noho ny fitondran-tena ara-teknika ny lisitra dia hatramin'ny dimam-polo m, ary raha ny fitambaran'ny faritra nandritra ny dimam-polo m fanampiny. roa-polo AZN dia ilaina asa fanompoana ho toy ny saram ho an'ny tsirairay m faritra.
Raharaha ny Mpisolovava, ny Lalàna Orinasa ao Shina ho an'ny Isan-Tanàna
Mpiaro, ny Lalàna Mafy ny foibeny ao Barcelone sy ny ahitana manam-pahaizana avy any amin'ny Barcelona Fisotroana Fikambanana (ICAB) raharaham-barotra manam-pahaizana manokana sy ny panjakanaHo an'ny mihoatra ny ampahefatry ny taonjato efa nandamina ny raharaha nampiandraiketina antsika amin'ny teny espaniola sy ny vahiny ny olona sy ny orinasa ao koa. Isika iraisam-pirenena ara-barotra ny Lalàna Mafy amin'ny anjara fanompoana ao Beijing, Dubai, Hamburg, Hong Kong, Le Havre, Londres, Monaco, Paris, Tany piraeus, Shanghai ary i Singapore.
Ny mpanjifa isan-karazany avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena lehibe ny orinasa kely, hany mpivarotra sy ireo olon-tsotra. Naorina tamin'ny, Talal Abu-Ghazaleh ara-Dalàna (TAGLegal) nanampy mbola hafa professional mafy mba TAGorg ny sakany vondrona iraisam-pirenena nanaiky ny orinasa, izay fantatra amin'ny maha-vondrona lehibe indrindra professional mpanome tolotra aterineto any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana.
TAGlegal amin'izao fotoana izao ny global raharaham-barotra ny Lalàna Mafy. Fangda Mpiara-miasa dia ny iray voalohany dia tena miankina amin'ny fiaraha-miasa Lalàna Shinoa Orinasa. Ho setrin'ny ny fitomboana ara-toekarena tao Shina, ary miha-betsaka sy maro karazana ny fepetra takiana ny fitomboan'ny isan'ny mpampiasa vola iraisam-pirenena, ny asa fitoriana dia ny manome asa fanompoana matihanina amin'ny kalitao avo mba. Guanghe Lalàna Mafy naorina any Shenzhen tamin'ny aprily Tato anatin'ny dimy ambin'ny folo taona dia nanatri-maso ny fifadian-kanina fampandrosoana ny G. Lalàna Mafy, izay amin'ny lafiny sasany, dia taratry ny ankapobeny ny toe-karena sy fampandrosoana ny sosialy ao Shina. Ny daty, Guanghe efa nitsangana ho mpitarika feno Lalàna Mafy ao Shina. Miaraka.
Tsy mandeha any Ivelany: Shina ny Fahasalamana Mpitari-dalana ho an'ny Mpianatra Iraisam-pirenena
Toy ny liana ny tanora tsy Shinoa mpianatra, dia mety ilaina ny mahazo ny soso-kevitra sasany rehefa mikasa hifindra any Shina, eo amin'ny fohy sy lava tenyIanao dia ho tsara indrindra-nanompo ny fahatakaran-javatra sasany ny fepetra ara-pitsaboana sy ny fiantohana ny safidy toy ny mpianatra iraisam-pirenena monina ao Shina. Miankina amin'ny faharetan'ny ny hijanona ao Shina, dia mety ho ilaina mba hiaritra ny fanadinana ara-pitsaboana ao amin'ny bahoaka hopitaly mba hahafantarana ny fahasalamana ankapobeny ny toe-javatra. Ho an'ny mpianatra izay hijanona mihoatra ny roa ambin'ny folo volana, ny ara-pitsaboana fandinihana dia tsy maintsy atao iray volana alohan'ny mandeha. Fepetra toy izany no nataony tao an-toerana any ny fanekena ny fisian'ny fiofanana any Shina ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena. Ny ara-pahasalamana dia zava-dehibe toy ny mandeha ho ny Sinoa internship fandaharana. Toy ny mpianatra iraisam-pirenena ao Shina, mety hisy ny ady eo amin'ny ara-pitsaboana fitsipika ianao ka efa zatra ao amin'ny firenena sy izay nanolotra amin'ny teny Sinoa ny fahasalamana. Noho ny antony ara-kolotsaina, fomba fiteny, sy ny fitantanana ny fahasamihafana, dia mety hahita fa namangy ny sasany amin'ireo hopitaly be ny fahasarotana sy ny fahatarana. Plus, misy fiovana ao amin'ny fahasalamana fitsipika arakaraka ny toerana misy anao dia hahita ny tenanao. Raha toa kosa ny sasany amin'ireo foto-drafitrasa afaka manome fitsaboana ho an'ireo vahiny, ny sasany mety tsy ho ampy fitaovana mba handraisana ny tsy mponina ao an-toerana noho ny teny sy ny sakana ara-kolontsaina. Izany dia, noho izany, ny ho tokony hatao ho anao ny mifidy ny tsara fiantohana ara-pahasalamana izay no cater noho ny filàna ara-pahasalamana. Ianao dia mahatsapa fa raha mahita ny tenanao ao amin'ny Shinoa faritra ambanivohitra, ny diany sy ny fifandraisana foto-drafitrasa no mbola taraiky be. Mihevitra fa eny ambanivohitra tobim-pahasalamana mety tsy manana ny fitaovana tsara mba hiatrehana ny olana ara-pahasalamana, mandeha dia mety ho ilaina mba hahazoana tsara kokoa ny tolotra.
Noho izany, dia tokony hividy na ny ara-pitsaboana sy ny manokana ny loza (PA) tsy nahy ny fahafatesana sy ratra fiantohana politika.
Izany dia fepetra takiana ho an'ny mpianatra Shinoa internship fandaharana ho amin'ny fe-potoana mihoatra ny iray taona. Ny politika dia zava-dehibe aminao satria tsy misy afaka milaza mialoha izay olana ara-pahasalamana dia afaka ho tonga manerana ity. Raha toa ianao dia tsy maintsy mandeha avy any amin'ny faritra ambanivohitra mba mahazo fitsaboana, ohatra, dia mety hahazo naratra tao ny fiara mpamonjy voina ary na inona na inona eventualities dia ho rakotry ny politika. Ny fiovana eo amin'ny toetr'andro sy ny tontolo iainana ny toe-javatra foana ny misarika ny loza ara-pahasalamana.
Mba ho azo antoka avy amin'ny ahiahy, ny fiantohana politika dia hanarona anao.
Azonao atao ny mividy izany fiantohana alohan'ny mandeha, na rehefa afaka izany, arakaraka ny safidiny. Ao amin'ny seranam-piaramanidina, dia hahita fiantohana mpiasa ny Shinoa ny politika izay dia manoro hevitra sy manampy anao araka ny tokony ho izy. Ianao nanoro hevitra toy ny fianarana iraisam-pirenena ao Shina ny mifidy avy any ivelany ny vola hopitaly ary toeram-pitsaboana noho ny fitsaboana. Ianao ihany koa dia tokony ho tsara ny fiantohana ara-pahasalamana drafitra toy izany koa fa afaka misafidy ho an'ny tsara indrindra izay manarona ny zavatra ilaina. Ny Shina ny fomba amam-panao ny Fitsipika dia tompon'andraikitra ny fiadanan ny Shina olom-pirenena ary koa ny teratany vahiny. Ao amin'ny tombontsoam-bahoaka ny fiarovana, dia ho takiana mba fenoy ny entana fanambarana endrika ao amin'ny seranan-tsambo izay ahitana ny sasany fandrarana ny zava-mahadomelina. Ho hitanao mahery fo, morphine, opium, ara-pitsaboana ny rongony sy ny hafa fahazarana-ny fananganana ny zava-mahadomelina dia tsy navela hiditra tao Shina. Ianao tsy ho avela hitondra zavatra ireo izay heverina ho tsy ara-dalàna Ianao angamba ho tonga avy any amin'ny firenena izay tsy ara-dalàna ny rongony, fa ny toe-draharaha isan-karazany ao Shina.
Medical levitra, toy izay no ilaina ny fanafody ho anao tahaka ny anti-diarrheal zava-mahadomelina sy ny laxatives no avela.
Toy ny tanora iraisam-pirenena ny mpianatra, dia azo antoka any ny tena mahaliana sy mahafinaritra ny dingana amin'ny fiainanao. Ny firaisana ara-nofo eo anivon ireo tanora dia avo ka rehefa tonga any Shina, ho lahy skoto ary tonga vonona. Shina amin'ny maha-firenena azy izay namorona ny iray-ny ankizy-politika manome mora azo vohoka na ny fimailo sy am-bava levitra. Afaka mandeha any amin'ny toeram-pivarotana, na toeram-pitsaboana sy ny hividy azy ireo, na ny fiaraha-monina tobim-pahasalamana, ary hahazo azy ireo ho maimaim-poana. Na izany aza, ianao ihany no omena manokana be, ka raha irinao mba ho soa aman-tsara, izany dia tokony hatao ny mitondra betsaka araka izay irinao ianao raha mandeha.
Ny marika ampiasaina ianao ho avy aiza ianao mety tsy ho hita ao Shina noho izany dia mety ilaina ny mitondra ny tenany ihany koa. Ny marika hita dia voafetra sy ny mety ho samy hafa avy ireo tsara ianao Raha toa ianao tsy afaka ny hahita ny naniry ny marika, dia afaka fikarohana sy mampitaha ny hormonina ao amin'ny misy ny iray ka tsy mety mahita akaiky ny lalao.
Raha tsy izany, dia tsy misy maha-de crédit, mbola hanana ny fidirana amin'ny fanabeazana aizana ho an'ny fiarovana ny fahasalamana. Ka na ianao-pirenena Shinoa, na hafa firenena, fanabeazana aizana io dia manavakavaka. Rehefa avy nipetraka ny olana ara-pahasalamana ny alalan ny fanazavana omena etsy ambony, toy ny mpianatra iraisam-pirenena dia manana fahafahana ho an'ny karama fiofanana any Shina mandritra na rehefa ny fianarana. Ianao no ekena ao anatin ny rafitra noho ny maniry ny hianatra ao amin'ny Sinoa ny rafi-pampianarana. Noho izany, tao amin'ny mazava ho azy fa ny fianarana, ny fahafahana mandray karama internship nomena anao amin'ny alalan'ny politika nolanian'ny ny andrim-panjakana halalininao.
Nahazo Shinoa miasa traikefa mety manampy ny fivoarana toy izany ny fahafahana miasa ao amin'ny kolontsaina maro ny fanamboarana izay.
Ny Sinoa tsenan'ny asa koa ny liana eo amin'ny fahaiza-manao sy ny fahalalana izay efa nentinay avy ny zom-pirenena isan-karazany.
Noho izany rehefa mandalina ianareo, mitondra ao an-tsaina fa ity no tsy fahafahana hianatra, nefa koa misy fahafahana noho ny asa fampandrosoana.
Nandeha ho an'i Shina amin'ny maha-mpianatra iraisam-pirenena no mahatonga fitakiana ny anao, ary ny iray an ny toa azy ny fepetra ara-pitsaboana. Noho ny ara-pahasalamana, sy fahalalana ara-politika ao amin'ny firenena mpampiantrano, ny fanazavana etsy ambony dia ilaina toy ny mpitari-dalana ny fanomanana. Mpianatra iraisam-pirenena, indrindra fa ny avy amin'ny firenena Tandrefana, ny sasany mitaky fitsaboana soso-kevitra rehefa miomana mba mitsidika an'i Shina.
Ny maha-samy hafa ny fenitra ara-pahasalamana sy ny politika dia afaka mitaky amin'ny mpianatra iraisam-pirenena mba handray ny politika fiantohana ary mitondra fitaovana ara-pahasalamana izay hifanaraka ny zavatra mahaliana.
Misy zava-mahadomelina fandrarana ao Shina, na dia izany aza, tsy toy ny any amin'ny firenena hafa maro izay ny mpianatra ho avy. Toy ny TALE mpitantana ny Asa ny asa an-tsambo, Yuri efa niasa nandritra ny fito taona amin'ny talenta ekipa mba hanorina fiaraha-miasa eo amin'ny, ny fikambanana izay manome toerana ho fatra-paniry laza olona vonona ho zava-tsarotra.
Ny fianakaviana Lalàna ao Shina
izay te-hanambady any Shina na ianao na dia mihevitra ny hametraka ny fianakaviana any, tokony ho fantatrao ny fomba fiainan'ny fianakaviana dia voafehin'ny lalàna, ary inona ny zon'olombelona ao Shinalasa tsy maintsy atao ao Shina, indrindra indrindra noho ny sasany mpivady dia tsy miraharaha ny fepetra ara-dalàna ny fisoratana anarana sy ny ihany no tanterahina ny nentim-paharazana ny fampakaram-bady. Ny fanambadiana dia azo heverina ho banga ao Shina, raha ny fepetra ara-dalàna ho an'ny taona ny ambany indrindra dia ny mpivady no tsy nihaona na raha toa ny iray amin'ireo mpivady dia efa manambady. Ny fanitsiana ny lalàm-panambadiana nanao tamin'ny koa dia hita taratra amin'ny fomba nanohitra ny fisaraham-panambadiana. Ny fiovana dia tapa-kevitra ihany koa ny fampitomboana ny tahan'ny fisaraham-panambadiana any Shina amin'ny faramparan'ny taona. Ny mety hanampy anao amin'ny solontena ara-dalàna nandritra ny fisaraham-panambadiana na raha toa ka mila fanampiana ara-dalàna ny fizarana ny alalan'ny fanambadiana fananana nandritra ny fisaraham-panambadiana. na ny politikan'ny zaza tokana toy izany no antsoina hoe nampidirina ao Shina ho an'ny teratany Shinoa Nandritra ny taona maro, ny fitsipiky ny aina sy ny mpivady izay tsy manana mpiray tampo aminy ny tenany no avela hanan-janaka roa. Ny Manomboka amin'ny orinasa iray any Shina dia mety ho sarotra izany satria tafiditra toy izany sarotra ny fomba fiasa. Ny ekipa avy amin'ny Mpisolovava an'i Shina net dia tena mendrika sy soa avy be dia be ny fahaizana ao amin'io faritra io.
Ny fianakaviana Lalàna sy ny fisaraham-Panambadiana ao Shina - mpila ravinahitra Lalàna
Efa hita fa mihoatra noho ny folo taona ny fomba fanao iraisam-pirenena fianakaviana lalàna, izaho matetika nanontany hoe:"Toy ny mpila ravinahitra, afaka aho ny fisaraham-panambadiana ao Shina.". Rehefa manao ny fanapahan-kevitra sarotra ny fisaraham-panambadiana, tsy maintsy handinika ny toerana sy ny fomba hanaovana izanyMisy ireo mihevitra ny hiverina an-toerana, noho ny fisaraham-panambadiana, fa ny sasany mihevitra divorcing ao Shina izay efa zatra monina nandritra ny fotoana ela araka izay heverin'izy ireo izany mba ho mora kokoa ho azy ireo. Eo ambanin'ny lalàna Shinoa, dia tsy misy ny fandrarana ny divorcing raha tsy efa nivady nandritra ny sasany ny lavany ny fotoana, toy ny misy any amin'ny firenena sasany (ohatra ny fisaraham-panambadiana ny alalan ny malagasy ny fitsarana dia tsy maintsy manambady ny olona iray taona na mihoatra). Ao Shina, na raha manambady omaly, ianao no mitondra ny lohateny hoe ny mangataka fisaraham-panambadiana amin'izao fotoana izao raha mino ny fanambadiana dia irretrievable rava.
Na izany aza, raha toa ny lehilahy sy ny vadiny tsy manaiky ny fisaraham-panambadiana, ny fitsarana Shinoa ny mety milaza ny fampihavanana.
Na izany aza, ny mety ho an'ny Shinoa fitsarana mba hanaiky ny fisaraham-panambadiana ny fangatahana dia miankina amin'ny fanefana ny fitsarana ny fahefana. Mba ho an'ny Britanika sy ny hafa ireo mpiasa vahiny ny fisaraham-panambadiana ao anatin'ny teny Sinoa fitsarana, ny iray amin'ireto manaraka ireto ny fahefana fepetra tsy maintsy tratrarina: 'Irretrievable fiatoana-midina ny fanambadiana' ny fitsipika izay ny fitsarana Shinoa dia tsy maintsy manaraka izany, rehefa manao ny fanapahan-kevitra momba ny fisaraham-panambadiana. Ankoatra izany, ny fisaraham-panambadiana ho toy ny fanomezana raha ny antoko iray amin'ny fanambadiana dia ambara ho banga sy ny antoko hafa antontan-taratasy ny hetsika noho ny fisaraham-panambadiana noho izany. Ao ny famintinana, nandritra ny mazava ho azy fa ny fisaraham-panambadiana hanaovana ilay fandidiana, ny antoko iza no mpangataka ny fisaraham-panambadiana dia tokony hanome ampy porofo mba hanaporofoana fa ny fanambadiana no rava irretrievably. Raha ny fikarakarana ny fisaraham-panambadiana, ny Sinoa fitsarana atao koa ny manao baiko momba ny fananan'ny mpivady sy ny fandaminana na inona na inona ny ankizy. Tsara nandrafitra prenuptial fifanekena na fifanarahana ara-panambadiana dia ho nanaraka ny fitsarana Izay misy ny antoko tsy manana prenuptial na fifanarahana ara-panambadiana, ny fitsarana Shinoa amin'ny ankapobeny dia ny fanajana ny fiaraha-mientana ifampizarana fifanarahana momba ny fianakaviana, ny fananana sy ny fikojakojana fa efa tonga eo amin'ny antoko. Raha ny fifanarahana dia tsy afaka ny ho tonga, ny Sinoa fitsarana dia hametraka ny baiko zarao ny fananana, ny manome ny fikolokoloana ny ankizy rehetra, ary niainga ny fandaharana ho an'ny ankizy ny fikarakarana. Ny tena fitsipika arahina amin'ny Sinoa ny fitsaràna dia ny hoe 'zanak' mahaliana tsara indrindra' tsy maintsy ho raisina ao amin'ny kaonty. Mihatra eto an-toerana sy iraisam-pirenena fianakaviana toe-javatra Ao anatin'ny nanohitra ny fisaraham-panambadiana hanaovana ilay fandidiana, ny ray aman-dreny dia takiana mba hametraka ny porofo manohana ny fampiharana ho an'ny zanaka am-ponja, ohatra. Ny fitsarana Shinoa ny mety ihany koa ho azo antoka fa ny zo sy ny andraikitry ny noncustodial ray aman-dreny no maka ny any ny kaonty. Eo ambany Ny fomba fanatanterahana ny Lalàna ny PRC, ny ao an-tokantrano raha izay no nanorim-ponenana amin'ny fampiasana ny famintinana ny fomba maka eo telo sy enim-bolana. Amin'ny toe-javatra iraisam-pirenena, izay mety tafiditra amin'ny fanompoana ny antontan-taratasy any ampitan-dranomasina, ary ny famoriam-bola ny porofo ampitan-dranomasina, ny halavan'ny ny fisaraham-panambadiana mba ho azo kokoa. Ankoatra izany, ho an'ny miampita sisintany fianakaviana toe-javatra, ao anatin'ny fe-potoana izay, ny fitsarana dia afaka ny ho niantso dia telo-polo andro, raha ho an'ny eto an-toerana toe-javatra izany dia dimy ambin'ny folo andro. Ity lahatsoratra ity dia omanina amin'ny alalan'ny Mpisolovava Ningning Zhao, ny Mpiara-miasa Jincheng Tongda Neal Lalàna Mafy, ny PRC. Ramatoa Zhao dia tena za-draharaha iraisam-pirenena fianakaviana toe-javatra, ary efa nampihatra ny lalàna ao Shina fa mihoatra noho ny folo taona. Ramatoa Zhao dia nanoratra ary efa namoaka boky mitondra ny lohateny hoe ara-Dalàna ny fomba fanao Iraisam-pirenena Fianakaviana toe-Javatra (Namoaka Lalàna ny asa fanaovan-Gazety sy Shina) sy Ny Mpisolovava ny fomba Fanao ao an-trano-Pitsarana (ny Mpiara-mpanoratra, Namoaka Lalàna ny asa fanaovan-Gazety sy Shina). Avm za-draharaha mpiaro ny tsiambaratelo sy mazava tsara ny toro-hevitra momba ny olana amin'ny antsipiriany ao amin'ny lahatsoratra. Vonona mba hitady torohevitra araka ny lalàna Miteny ny mpikambana ao amin'ny mpila ravinahitra Lalàna amin'izao fotoana izao sy hahazo mazava tsara sy ny tsiambaratelo toro-hevitra. Mba mangataka ny antso indray ampidiro ny antsipiriany ao an-tsaha ambany sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia miantso anao indray amin'ny fotoana angatahana.
Civics famaritana sy dikany - Collins amin'ny teny anglisy Rakibolana
Tsy misy vintana ny tsy fahombiazana
Tags fohy fanampiny izay mijery toy ny fanontaniana, ampiasaina amin'ny faran'ny declarative didim-pitsaranaIzy ireo dia indraindray dia antsoina hoe fanontaniana tags, fa maro ny sazy mifarana amin'ny tenifototra dia tsy tena fanontaniana.
Collocations no teny izay matetika ampiasaina miaraka ary mamirapiratra amin'ny fanomezana voajanahary maneno ny fiteny noho ny teny sy manoratra. Tsy misy fitadidiana tsianjery.
Ny fahafahana manana iray-ny-lesona iray amin'ny tsara indrindra-ny fivarotana ny teny manam-pahaizana i Paoly Ambony, miezaka ny maimaim-POANA teny sample ny vaovao Teny Sinoa mazava ho azy. Ny vaovao an-tserasera rakibolana ho an'ny sekoly manome soa aman-tsara ny tontolo iainana ho an'ny ankizy.
Mampitolagaga ny namanao amin'ny new-found fahalalana
Ary ny tsara indrindra amin'ny rehetra izany maimaim-poana ny ad, ka sonia ny ankehitriny, ary manomboka mampiasa ao an-trano na ao an-dakilasy.
Efa saika roan-jato lisitry ny teny avy amin'ny foto-kevitra toy ny isan-karazany toy ny karazana lolo, palitao, ny sandam-bola, legioma sy ny fatotra.
Havaozina amin'ny rehetra ny tena vaovao farany ny teny sy ny saina, vaovao ity andiany faha- dia loharano tsy manam-paharoa ho an'ny teny hoe tia, teny gamers, sy ny teny geeks na aiza na aiza.
Hihaonana amin'ny mpisolovava izay namela ny zava-drehetra ny asa ho maimaim-poana ny famonjena seranam-piaramanidina gadra
'Isika manao izay rehetra azontsika atao, Miao hoy izy
Raha an'aliny ireo nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny firenena iraisam-pirenena ny seranam-piaramanidina, ny mpisolovava' ny asa fitoriana dia tsotra: asehoy niakatra ho any amin'ny seranam-piaramanidina, miresaka ny fianakavian'ireo voasambotra ny mpanao dia lavitra tratra ao Trump ny Silamo ny fandrarana sy ny tolotra ara-dalàna ny asa pro bono'Miezaka izahay manampy ireo voafonja, Michelle Miao, mpisolovava fandrindrana ny ezaka atao ao New York City, niteny tao anaty tafatafa iray tamin'ny John F. Kennedy-Piaramanidina Iraisam-pirenena ny alin'ny sabotsy teo. Maherin'ny ireo mpisolovava efa miasa mafy, ary Miao andrasana hafa roapolo mba hanatevin-daharana azy ireo mialoha ny alina dia tapitra.
Ary avy eo ny iray hafa avy amin'ny valo p
'Ity fandraisana an-tanana ny zava-mitranga manerana an'i Amerika, hoy Miao, ny mpisolovava izay niasa tao amin'ny seranam-piaramanidina gorodona, pooling solosaina, mpanonta sy nania kaopy kafe mba hamokatra fanangonan-tsonia. 'Izany no mitranga amin'ny o'hare, ary avy eo dia misy ny kely seranam-piaramanidina. Tamin'ny sabotsy alina, ny federaly mpitsara namoaka hijanona fanakanana ny fandroahana ny seranam-piaramanidina ireo voafonja amin'ny ara-dalàna ny antontan-taratasy ho an'ny U. Fientanentanana sy jubilance nanasa ny alalan ny amin'ireo vahoaka marobe nanao fihetsiketsehana tao Amerika ny seranam-piaramanidina, anisan'izany ny Terminal efatra tao amin'ny New York ny Kennedy Seranam-Piaramanidina. Ny miaramilan ny fifindra-monina mpisolovava, na izany aza, dia tsy mitsahatra miasa. Tsy hody any an-trano. Ny asa dia vao manomboka. Ny hijanona ihany no nanakana an-katerena nogadraina ireo mpanao dia lavitra ireo mpandeha no mbola tsy afaka ny hiditra ny AMERIKANA na dia nisy Aza ireo gadra efa noafahana avokoa ny gadra ao Chicago ary roa, fara fahakeliny, any New York untold isa ny mety ho mpifindra monina sy ny mpitsidika, dia mbola any am-ponja tao amin'ny seranam-piaramanidina manerana ny firenena. Ny sabotsy maraina, fara fahakeliny, roa-polo gadra ireo dia voatazona ao amin'ny Kennedy seranam-Piaramanidina irery, araka ny voalazan'i Melissa Trent, iray amin'ireo mpisolovava an-tsitrapo.
'Manana mpisolovava eto efatra amby roapolo ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro.
Raha ny fandrarana nambara, ny Iraisam-pirenena ho Fanampiana ireo mpitsoa-Ponenana Tetikasa nataony avy ny mailaka mangataka na inona na inona mpisolovava momba ny fifindra-monina misy mba mahita seranam-piaramanidina iray ary an-tsitrapo-handray nifandimby ny voalohany dia nanomboka avy hatrany. ny telo-polo ny. metatra, ary avy eo dia mandra-mitataovovonana ny alahady. Mihoatra ny zato ny mpisolovava nanome an-tsitrapo ho an'ny fihodinana voalohany ny adidy. Ny asa mety ho sarotra amin'ny maro ny mpahay lalàna dia manidina jamba. Izany dia tsy ho vita ny hahafantatra ny fomba maro ny mpitsidika sy ny mpifindra monina ireo notànana tao Kennedy seranam-Piaramanidina. Tsy misy na iza na iza no niresaka ny fomba amam-panao ireo manampahefana ireo mpikambana ao amin'ny kongresy, mpahay lalàna sy manam-pahefana avy ao amin'ny biraon'ny ben'ny tanàna dia tsy nisy valiny. Rehefa nihazakazaka ny Terminal fito momba ny tsaho fa iraika ambin'ny folo gadra no natao teo, mpisolovava avy hatrany dia nidina tany, ary nanomboka nanao ny famantarana hoe: 'mpisolovava momba ny fifindra-monina. Ny fanantenana dia ny fianakavian'ireo gadra, dia hahita ny famantarana sy ny tatitra ny olon-tiany satria tsy misy, ary aoka ny mpahay lalàna haka ny toe-javatra. Fitadiavana ny gadra fotsiny ihany ny dingana voalohany amin'ny lava-dalana ny ady ara-dalàna. Ny fanaovana ny mpisolo vava dia tena nianatra zava-baovao faritany. Ny mpanatanteraka mba tsy navela hiditra ny olona izay, noho ny ankehitriny ny fifindra-monina ny fitsipika, dia ara-dalàna mahazo miditra amin'ny United States. 'Tsy mbola nahita zavatra toy izany araka ny fomba fanao, 'Jonathan Mulligan, iray amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo mpisolovava momba ny fifindra-monina, dia niteny tao anaty tafatafa iray ho izy nihazakazaka Terminal. 'Angamba raha mijery any aoriana isika mba Shinoa fanilikilihana ny lalàna tamin'ny milaza ny lalàna fa tsy ny fifindra-monina Shinoa mpiasa, izay nijanona tao amin ny boky hatramin'ny taona. Raha vao ny mpisolovava hamantatra ny gadra, misy maro ara-dalàna ny lalambe ho hanenjika.
Ny voalohany dia ny habeas corpus fanangonan-tsonia, izay miantso ny gadra ho entina eo anoloan ny mpitsara (izany no fomba ny Sendikan'ny Fahafahana Sivily Amerikana ampiasaina mba handresy ny hijanona manohitra ny fandraràna).
Hafa tack dia ny hahazo ny mpifindra monina voasambotry ny 'azo itokisana ny tahotra tafatafa, izay an'ireo voatàna no mitady fialokalofana amin'ny alalan'ny milaza fa izany koa ny mampidi-doza ho azy ireo mba hiverina an-trano.
'Ho an'ny olona ankehitriny, amin'ny fitazonana, izany no nitifitra miezaka hahazo azy ireo karazana sata mba hahazo azy ireo ao amin'ny fialokalofana fitsarana, Marissa Ram, ny mpisolovava an-tsitrapo izay te vao niverina avy tany fifindra-monina miasa ao Berlin, niteny tao anaty tafatafa iray tamin'ny asabotsy.
Raha vao ny mpanao fihetsiketsehana naparitaky ny ary ny ACLU nanambara vonjimaika hijanona, ireo zavatra ireo dia tsy somebiseby erỳ ny mpisolovava amin'ny Kennedy seranam-Piaramanidina fa izy ireo nanohy ny asa manodidina ny famantaranandro, mpisolovava amin'ny tany hoy ny ao an-tariby ny dinidinika tara amin'ny alina.
'Isika mijanona eto ary izahay fivoriana sidina ary ho eto ny rehetra ny faran'ny herinandro, Miao hoy izy. 'Olona no mihevitra ny hijanona ny alalan' ny alina, kokoa ny mpisolovava ho tonga vaovao ny maraina.
'Ny fahamarinana, dia manana ny andro ny': Beijing lamosiny Huawei ny fitoriana hanoherana ny governemanta AMERIKANA
Shina ny governemanta no naneho ny fanohanany Huawei ny fanamby ara-dalàna manohitra ny AMERIKANA tamin'ny zoma, nilaza ny teknolojia mafy orina manana ny zo tsy mety ho"manimba ny mangina toy ny zanak'ondry."Huawei nametraka fitoriana tamin'ny alakamisy milaza fa ny fandraràna ny governemanta AMERIKANA ny sampan-draharaha mividy ny fifandraisan-davitra fitaovana tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenanaWang Yi, malaza indrindra ao Shina diplaomaty, hoy ny ny fitondrana any Beijing lamosiny ny orinasa ny ady ara-dalàna."I shina sy hitohy mba handray izay fepetra rehetra ilaina amim-pahasahiana hiaro ny ara-dalàna sy ara-dalàna tombotsoan'ny Sinoa raharaham-barotra sy ny olom-pirenena"i Wang hoy, araka ny fandikan-teny ofisialy ny teny Mandarin fanehoan-kevitra noraisina nandritra ny zoma adiresy."Mandritra izany fotoana izany, dia ny fanohanana ny orinasa sy ny tsirairay amin'ny fanontaniana eo amin' ny fikatsahana ara-dalàna fanonerana mba hiarovana ny tombontsoany manokana sy ny tsy fanekena ho niharam-boina mangina toy ny zanak'ondry,"hoy izy nanampy ny fanambarana nataony nandritra Shina ny Kongresy nasionalim-bahoaka, ny lehibe hetsika fanao isan-taona izay Beijing amin'ny fomba ofisialy, dia manambara lehibe ara-politika singa toy ny fitomboana ara-toekarena tanjona. Ny"orinasa sy ny olona tsirairay"ao amin'ny fanontaniana manondro Huawei sy ny orinasa Lehiben'ny ara-Bola Manamboninahitra, Meng Wanzhou, izay nosamborina ao amin'ny Kanada tamin'ny desambra ary dia miatrika ny fampodiana any ETAZONIA, ny ETAZONIA, dia niampanga azy ny hosoka. Huawei ny fitoriana manohitra ny AMERIKANA ny governemanta dia mifantoka amin'ny fizarana manokana momba ny fiarovam-Pirenena fahazoan-Dalana Hiasa, izay mandràra ny governemanta amin'ny sampan-draharaha avy amin'ny fahazoana Huawei gear. Huawei, miaraka amin'ny mpifaninana ZTE, dia mazava ny voalaza ao fa ny lalàna. Ny orinasa mpisolovava tiako fa fanomezana, fantatra amin'ny anarana hoe Faritra, scrapped amin'ny fanantenana fa afaka manampy hamerina ny fifampiresahana miaraka amin'ny governemanta AMERIKANA. Mandritra izany fotoana izany, Meng ny mpisolovava ankehitriny nitory Canadian manam-pahefana, ary nilaza izy ireo no nosamborina, nofonjaina ary nikaroka azy tamin'ny fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana ny zon'olombelona."Ny olona afaka milaza ny tsara sy ny ratsy, ny rariny dia tsy maintsy ny andro. Inona isika dia mijoro ho fotsiny dia tsy ny tombontsoan'ny orinasa, fa koa ny firenena iray na firenena ara-dalàna tsara ny fanavaozana sy fanitarana ny zo fototry ny firenena rehetra izay maniry ny mba miakatra ny teknolojia tohatra,"hoy i Wang. Wang tsy manazava ny fomba nakatona avy amin'ny fivarotana ny governemanta Amerikana dia hisorohana ny orinasa avy amin'ny fanavaozana. Ny fanehoan-kevitra avy Wang no farany tamin'ireo andiana fanehoan-kevitra avy na Huawei na ny governemanta Shinoa fa ny ETAZONIA dia mandray anjara amin'ny mialoha-meditated fanafihana ny orinasa. Beijing dia matetika soso-kevitra izany, satria izao tontolo izao lehibe indrindra ny toe-karena mahatsapa ny tombotsoan'ny fandraharahana no nandrahona ny fifandraisan-davitra ary ny teknolojia Shinoa raha hitarina. S, na izany aza, dia niteny fa manahy momba ny fiarovana amin'ny loza apetraky Huawei, amin'ny filazana fa ny orinasa ny fitaovana mety misy backdoors izay mety ho ampiasain'ny governemanta Shinoa ho nanao asa fitsikilovana. Huawei efa nandà hatrany ireo milaza, fa ny faharanitan-tsaina ny manam-pahaizana izay niresaka CNBC hoe: tsy misy antony ny fisalasalana momba ny orinasa ny fanomezan-toky fa tsy misy atahorana. Manam-pahaizana manoro ny lalàna Shinoa fa voalaza hoe isaky ny orinasa ao an-toerana dia tsy ara-dalàna ataon'ny mba hanampy ny firenena amin'ny faharanitan-tsaina fanangonana. Shina ny orinasa koa dia heverina ho voarara avy miresaka momba ny na inona na inona ny faharanitan-tsaina ny asa. s. telecom tsena afaka miadana ny rollout ny manaraka taranaka tambajotra finday teknolojia fantatra amin'ny anarana hoe G sy handratra ny mpanjifa, dia milaza ny manam-pahaizana no voaroaka.
Panjakana fisarahana Shina
Noho Shina lehibe mponina sy ny faritra, ny fisarahana ara-panjakana ao Shina no nahitana ny ambaratonga maro hatramin'ny fahinyNy lalàm-panorenana ao Shina dia manome nandritra ny telo de jure sehatra ny governemanta. Amin'izao fotoana izao, na izany aza, misy dimy azo ampiharina (de facto) sehatra ny governemanta eo an-toerana: ny any amin'ny faritany (province, mizaka tena ny faritra, ny kaominina, ary manana rafi-pitantanana manokana), prefektioran'i, faritra, ny kaominina, ary ny tanàna.
Hatramin'ny taonjato faha, any amin'ny faritany, faritra ao Shina dia mbola betsaka voasakantsakan'ny.
Fiovana lehibe hatramin'ny dia efa nisy ny fandaminana indray ny faritany any avaratra atsinanana taorian'ny fametrahana ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina sy ny fananganana ny faritra mizakatena, mifototra amin'ny Sovietika ny politika ara-poko. Ny faritany hanompo manan-danja ara-kolontsaina anjara ao Shina, ho toy ny olona miezaka ny hamantatra ny tompon-tany ny faritany. Ny lalàm-Panorenana ao Shina dia manome ho ambaratonga efatra tao ambadika ilaina: ny biraom-paritra (faritany, ny faritra mizaka tena, ny kaominina, ary manana rafi-pitantanana manokana), ny prefectural (prefektioran'i-level-tanàna tamin'ny fomba ofisialy ny 'tanàna amin'ny distrika ambaratonga fisarahana' sy ny 'tanàna tsy misy distrika ambaratonga fisarahana', mizaka ny prefektioran'i, prefektioran'i fanampiny ny fisarahana sy ny fikambanam-ny hafa ny anaran"ny prefektioran'i"izay ampiasaina ao Mongolia afovoany), faritra (distrika, faritra, anivon'ny faritra-tanàna tamin'ny fomba ofisialy ny"tanàna tsy misy distrika ambaratonga fizarana", mizaka tena county, sora-baventy ny hafa ny anarany ny"- paritra"izay dia ampiasaina any Inner Mongolia, mizaka tena sora-baventy ny hafa anaran"mahaleotena county"izay ampiasaina any Inner Mongolia, manokana distrika fanampiny fizarana, ny fitrandrahana ny ala faritra fanampiny division) ary ny kaominina. Izany dia tokony homarihina fa ny ambaratonga fahadimy izay matetika fantatra amin'ny anarana hoe"tanàna anivon'ny"dia raha ny marina dia tsy ny ara-panjakana ny sehatra. Ny lalàm-Panorenana ao Shina teti-dratsy ambaratonga fahadimy"ambaratonga fototra fahaleovan-tena". Toy ny update, Shina mitantana telo amby telo-polo any amin'ny faritany,-anivon'ny faritra, prefektioran'i-level fisarahana, anivon'ny faritra-ny fisarahana, township-sehatra fametrahan-tanana, ary, ambaratonga fototra autonomies. tao ambadika ilaina Isaky ny ambaratonga (afa-tsy 'manokana ara-panjakana any amin'ny faritra') mifanitsy amin'ny ambaratonga ao amin'ny asam-ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina. Latabatra ity dia mamintina ny fizarana ny faritra nitantana ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina Ho ny volana jona taona fanavaozam-baovao. Repoblika entim-bahoakan'i Sina (PRC) mitantana telo-polo amby efa-paritany-sehatra fizarana voalohany na ambaratonga ny fisarahana, anisan'izany ny telo amby roa-polo faritany mizaka tena dimy faritra, kaominina efatra, ary roa manokana ara-panjakana faritra: Faritany ireo ara-poto-kevitra hanompo ny PRC ny governemanta foibe, saingy ny fomba fanao-paritra ny manam-pahefana no lehibe ny fisainana mazava momba ny politika ara-toekarena. Tsy toy ny any Etazonia, ny herin ny governemanta foibe dia (afa-tsy ny miaramila) tsy ampiasaina amin'ny alalan'ny mitovy napetraka ny andrim-panjakana mandra-ny fiandohan'ny taona. Ny tena azo ampiharina ny herin ny faritany dia namorona inona toe-karena ny sasany antso federalism amin'ny Sinoa. Ny ankamaroan ny faritany, afa-tsy ny faritany any avaratra atsinanana, manana sisintany izay efa naorina hatry ny ela ao amin'ny Yuan, Ming, ary Qing dynasties. Indraindray paritany sisin-endrika ara-kolotsaina na ara-jeografika ny sisintany.
Izany dia ny ezaky ny imperial governemanta hahakivy ny fisintahana sy ny ady amin'ny alalan'ny fisarahana sy ny fitsipi-politika.
Na dia izany aza, any amin'ireo faritany efa tonga mba hanompo manan-danja ara-kolontsaina anjara ao Shina. Matetika ny olona mba ho fantatra eo ny tompon-tany ny faritany, ary isaky ny faritany dia manana fomba fijery izany mifanaraka ny mponina. Ny vao haingana indrindra ara-panjakana ny fiovana efa tafiditra ny isam-ponina ny Hainan, ary ao Chongqing ny faritra ny haavon'ny toerana, ary ny famoronana Hong Kong sy Makaô toy Manokana ara-panjakana any amin'ny faritra. Prefectural anivon'ny fisarahana na ny faharoa-sehatra ny fisarahana dia ny faharoa haavon'ny ny rafitra ara-panjakana. Indrindra ny faritany dia nozaraina ho ihany prefektioran'i-level-tanàn-dehibe, ary tsy misy hafa ambaratonga faharoa vondrona ara-panjakana. Ny roa amby roa-polo faritany sy dimy faritra mizakatena, afa-tsy telo faritany (Yunnan, Guizhou, Qinghai) ary ny iray ho an'ny faritra mizaka tenan'i (Xinjiang) efa mihoatra ny telo faharoa-ny ambaratonga na prefectural-sehatra ny fisarahana izay tsy prefektioran'i-level-tanàn-dehibe. Toy ny aogositra, nisy prefectural anivon'ny fisarahana: Ny ambaratonga fototra amin'ny fahaleovan-tena dia toy ny fandaminana ny fizarana (fanisam-bahoaka, mail system) sy ny tsy manana be dia be maha-zava-dehibe eo amin'ny politika ny solontenan'ny fahefana. Fototra ao an-toerana fisarahana toy ny mpifanolo-bodirindrina ary fiaraha-monina tsy ara-dalàna toy ny any Amerika fa manana ny famaritana ny fetra sy voafidy lohany (iray isaky ny faritra): Amin'ny faritra an-drenivohitra, isaky ny subdistrict ny distrika iray ao amin'ny tanàna mitantana maro ny fiaraha-monina na ny toeram-ponenana komity. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manana toeram-ponenana komity hanatanteraka ny mponina amoron-drano izay manodidina na ny fiaraha-monina. Ambanivohitra milamina tao an-tanàna ny komity na ny villager vondrona. 'Vohitra' izany raharaha atao na ho voajanahary ny tanàna iray, izay nahitàna ary mazava ho misy, na ny virtoaly tanàna, izay ny mpiasa biraon'ny fikambanana. Tanàn-dehibe dimy tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny prefectural anivon'ny manana sata manokana mikasika ny fandaminana sy ny teti-bola. Izy ireo dia misaraka voatanisa ao ny dimy taona ka isan-taona ny fanjakana drafitra toy izany koa eo amin'ny sehatra toy ny faritany sy ny minisitera, ny fanaovana azy ireo tsy miankina ara-toekarena ny governemantam-paritany. Ireo tanàn-dehibe indrindra ny voatondro ao amin'ny fanjakana drafitra (Sinoa: 计划单列市) dia Eo ny teti-bola, ny fahefana, ny governemanta dia manana de facto satan'ny faritany, fa ny lalàna taova (Kaongresy nasionalim-bahoaka sy ny Vahoaka Shinoa ny Politika Consultatif amin ny Conference) sy ny manam-pahefana hafa tsy mifandray amin'ny toe-karena eo amin'ny sehatra ny prefektioran'i ary eo ambany fitantanana ny faritany. Ny sasany hafa lehibe prefektioran'i-level-tanàn-dehibe, fantatra amin'ny anarana hoe zana-paritra tanàn-dehibe, dia ny antsasaky ny ambaratonga ambany ny faritany.
Ny ben'ny tanàna amin'ireo tanàna ireo mitovy laharana amin'ny maha-lefitry ny governoran'ny faritany, sy ny distrika ny fitondram-panjakana dia ny antsasaky ny laharana ambony kokoa noho ny ara-dalàna ny distrika.
Ny kapitaly ny sasany faritany (seza ny governemantam-paritany) dia zana-paritra tanàna. Ankoatra ny tanàn-dehibe dimy manokana voatondro ao amin'ny fanjakana drafitra, zana-paritra Ny tanan-dehibe toy izany koa ny tranga misy ny sasany anivon'ny faritra- tanàna. Ny sasany anivon'ny faritra-tanàna dia omena bebe kokoa fahaleovan-tena. Ireo tanàn-dehibe dia fantatra amin'ny anarana hoe zana-prefektioran'i-level-tanàn-dehibe, izay midika fa izy ireo dia omena sehatra ny hery ambony kokoa noho ny faritra, saingy mbola ambany noho ny prefecture. Toy ny tanàn-dehibe ihany koa ny antsasaky ny sehatra ambony noho izay izy ireo dia tokony ho. Zana-prefektioran'i-level-tanàn-dehibe matetika no tsy nataony ho ny misy prefektioran'i (izany hoe izy ireo dia mivantana itantanana ny faritany). Ny sasany amin'ireo distrika ihany koa ireo napetraka amin'ny antsasaky ny ambaratonga ambony fa ny zavatra tokony ho. Na ny toerana ho toy ny distrika ny kaominina dia mamaritra azy ho toy ny prefektioran'i-ambaratonga, ny distrika lohan'ny Pudong dia nomena zana-paritra fahefana. Amin'ny teny hafa, dia ny antsasaky ny ambaratonga ambony kokoa noho izay mety raha ny tokony ho. Ny teny Shinoa shì no matetika maka nadika ho amin'ny teny anglisy hoe 'city'. Na izany aza, tsy dia maro samy hafa ny dikany noho ny fahasarotan'ny ny fisarahana ara-panjakana ampiasaina ao Shina. (Na dia eo aza ny maha-tanàn-dehibe na ny manana tanàn-dehibe, ny sras eny dia saika tsy antsoina ho 'Hong Kong-Tanàna' 'Makaô-Tanàna' ao amin'ny vanim-potoana Shinoa, dia toy izany no tsy avy eto ambany) dia Zava-dehibe ny manome ny famaritana ny 'tanàna', rehefa niresaka momba ny antontan'isa angona Shinoa ny tanàna, raha tsy izany, fikorontanan-tsaina mety hitranga.
Ohatra, ao Shanghai no tanàna lehibe indrindra ao Shina amin'ny vahoaka ao amin'ny faritra an-drenivohitra anefa no kely noho ao Chongqing, noho ny mponina ao amin'ny fitantanana ny faritra.
Alohan'ny fametrahana ny Fiankohonana Qin, Shina, no nitondra ny tambajotra ny mpanjaka, andriana, sy ny foko. Ny fifandrafiana ireo vondrona ireo dia niafara tamin'ny Miady Hoy ny fe-potoana, ary ny toetry ny Qin nivoaka farany indrindra. Ny Fiankohonana Qin dia tapa-kevitra ny tsy hamela Shina ho lavo indray ho disunity, ary noho izany dia natao voalohany ambaratongam-pitondrana fisarahana ara-panjakana ao Shina, mifototra amin'ny ambaratonga roa: jùn commanderies sy xiàn fivondronana. Ny Fiankohonana Han fa tonga avy hatrany rehefa avy nanampy zhōu (matetika adika hoe 'faritany') toy ny dingana fahatelo eo an-tampony, fananganana telo-tier rafitra.
Ny Sui Tarana-mpanjaka sy ny Fiankohonana Tang nofoanana commanderies, ary nanampy faritra (dào, taty aoriana lù eo ambanin'ny Hira sy Jin) eo an-tampony, ny fitazonana ny telo-tier rafitra izay naharitra ny alalan ny Taonjato faha.
(Toy ny faharoa-sehatra fizarana, zhou dia nadika hoe 'prefektiora'.) Ny Mongol-Yuan nametraka Fiankohonana nampiditra ny maoderina precursors ny faritany, mitondra ny isan'ny ambaratonga efatra. Ity rafitra ity dia foana mihoatra na latsaka simba mandra-Qing Fiankohonana, ny farany imperial fiankohonana ny fitsipika Shina. Ny Repoblikan'i Shina streamlined ny haavon'ny fotsiny faritany sy ny fivondronana tamin'ny izy, ary nanao fanandramana voalohany mba hanitatra ny politika fitantanana any ankoatry ny faritra ny haavon'ny amin'ny alalan'ny fametrahana townships ambany fivondronana. Izany ihany koa ny rafitra ofisialy noraisin'ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina tamin'ny, izay voafaritra ny fisarahana ara-panjakana ao Shina amin'ny maha-ambaratonga telo: faritra, fivondronana, ary townships. Amin'ny fampiharana, na izany aza, sehatra bebe kokoa no ampidirina. Ny ROC governemanta tsy ho ela dia nianatra fa tsy azo atao ho an'ny faritany iray mivantana hitantana am-polony, ary indraindray an-jatony ny fivondronana. Nanomboka avy amin'ny faritanin'i Jiangxi tamin'ny, Prefektiora ireo taty aoriana dia nampidirina eo amin'ny faritany sy fivondronana. Mbola ho ubiquitously ampiharina amin'ny alalan'ny ny PRC governemanta mba saika ny faritra rehetra any Shina hatramin'ny taona. Nanomboka teo, indrindra ny prefektiora dia niova fo ho prefektioran'i-level-tanàn-dehibe. Lehibe kokoa ny fitantanana ny faritra dia nampidirina eo an-tampony ny faritany ny PRC governemanta, saingy izy ireo tsy ela dia nofoanana, tamin'ny. Distrika bahoaka birao dia ampidirina eo amin'ny fivondronana sy townships raha vao hita ihany koa, izy ireo amin'izao fotoana izao ho nofoanana ary vitsy dia vitsy sisa no tavela.
Ny vao haingana indrindra dia lehibe ny fivoarana efa nisy ny fametrahana ao Chongqing, toy ny kaominina sy ny fananganana an'i Hong Kong sy Makaô toy manokana ara-panjakana any amin'ny faritra.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nisy ny antso ho amin'ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha ny fisarahana sy ambaratonga Shina. Tsaho iray lehibe mananontanona ny fanavaozana koa ny niely isan-karazany amin'ny alalan'ny online bulletin zana-kazo. Ny distrika bahoaka birao dia mbola mitohy ny fanavaozana ny hanesorana fanampiny sehatra fitantanan-draharaha avy eo ny faritra sy ny kaominina ambaratonga. Nisy ihany koa ny antso mba hanafoanana ny prefektioran'i ambaratonga, ary ny sasany amin'ireo faritany efa nafindra ny sasany amin'ireo hery prefektiora amin'izao fotoana izao dia mihazona ny fivondronana izy ireo mifehy. Misy ihany koa ny antso mba hampihena ny haben'ny ny faritany Ny tena tanjona dia ny mba hampihena ny hafa ny fitantanana ny haavon'ny avy amin'ny dimy telo (Paritany ambaratonga, County ambaratonga, Tanàna anivon'ny), ny fampihenana ny habetsaky ny kolikoly ihany koa ho toy ny isan'ny governemanta ny mpiasa, mba hampidina ny teti-bola.
Shina tanana Microsoft ny fitantanana tsara ny Xbox barotra Amin'ny Reuters
BEIJING (Reuters) - ny Microsoft Corp (O: MSFT) sy ny Shinoa mpiara-miasa ao amin'ny Xbox lalao hampionona barotra efa handoa onitra avy ao Shina ny varotra minisitry ny mandika antitrust fitsipika saingy afa-nandositra lehibe sazy rehefa heverina, dia tsy manelingelina tsena malalaka ny fifaninananaMicrosoft sy Shanghai Tatsinanana Pearl haino aman-Jery Co Ltd (SS:), fantatra amin'ny anarana hoe Tsara indrindra, dia handoa onitra yuan (dolara)tsirairay noho ny tsy tatitra antitrust dalàna fa ny mpiray sahy nihoatra ny tsena tokonam-baravarana izay matetika mahatonga ny fampiharihariana ny fitakiana. Ny Xbox fanadihadiana, izay tsy nahita Xbox tena fanitsakitsahana misy antitrust lalàna, dia tsy misy ifandraisany amin'ny fanadihadiana misy amin'izao fotoana amin'ny alalan'ny Shina-Pirenena amin'ny Fampandrosoana sy ny Fanavaozana ny Vaomiera ho Microsoft Windows fandidiana ny rafitra sy ny Birao rindrambaiko sales fanao. Mampirisika anao izahay mba hampiasa ny fanehoan-kevitra ny hanao amin'ny mpampiasa, mizara ny fomba fijery sy ny hametraka fanontaniana ny mpanoratra ary ny samy hafa.
Trosa amin'ny fanohanana ny fandoavam-bola dia matetika mitranga
Ireo ray aman-dreny izay tsy maintsy handoa alimony ny zaza, fa noho ny antony tsy nisalasala ny adidy, dia voatery mba hanomezana vola ny trosa amin'ny trosaNy antoko izay nomena alalana handray fanohanana ny ankizy alohan'ny hahatrarana ny faha-valo ambin'ny folo dia manana zo hampihatra ny ny fitsarana ho an'ny fanarenana ny alimony rehefa ny antoko voatery mandoa alimony mandositra fandoavam-bola. Alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra momba fanarenana ny alimony, ny fitsarana dia tsara ny manao ny mety ho fanapahan-kevitra momba ny fanarenana ny alimony. Amin'ny toe-javatra, raha ny antoko tsy afaka miombon-kevitra amin'ny fandoavam-bola, ary koa, raha ny mpandoa mandositra fandoavam-bola, avy eo dia ny fanarenana ny alimony miseho amin'ny alalan'ny fitsarana amin'ny alalan'ny fandefasana ny fangatahana ny manampahefana ara-dalàna. Trosa ho lasa fanohanana ho takin'ny ny fototry ny fangatahana fampiatoana didy famonoana ho faty na ny fifanekena mikasika ny fandoavam-bola ny alimony ao anatin'ny telo taona, izay nialoha ny fanolorana ny notarial taratasy na ny fangatahana fampiatoana didy hamonoana ny fanohanana ny ankizy izay iharan'ny fanarenana. Raha izy ireo no nihazona ny fototry ny notarial fifanarahana na ny fangatahana fampiatoana didy fanamelohana ho faty amin'ny fandoavana ny alimony dia tsy natao izany satria ny olona iray izay dia voatery tsy maintsy mandoa vola, alimony dia nangonina tao feno ho an'ny vanim-potoana iray manontolo ny fotoana. Ankoatra izany, ny efa misy trosa ho an'ny fikojakojana dia napetraky ny bailiff ny fototry ny ny zava-dehibe, raha toa ka efa tapa-kevitra ny fifanarahana na ny fitsarana. Ny habetsahan'ny alimony dia tapa-kevitra miorina amin'ny vola na zavatra hafa fidiram-bola ny olona izay tsy maintsy mandoa vola nandritra ny vanim-potoana izay fandoavam-bola dia tsy natao. Raha izany, tamin'izany fotoana izany, ny ray aman-dreny ny fandoavana alimony tsy miasa, dia iray MROT, izay naorina ao amin'ny Federasiona rosiana nandritra izany fotoana izany, dia tsy avy aminy. Raha izany dia be no mahatonga ny zavatra tsara-ny maha-iray ny ray aman-dreny, dia ny ray aman-dreny izay mahaliana dia nandika afaka mampihatra ny lalàna ny manam-pahefana mba hamaha ny trosa ao raikitra vola. Ao ny tsy fisian'ny fifanarahana eo amin'ny fandoavam-bola ny alimony, ary rehefa antoko voatery mandoa alimony dia mitsingevana vola na zavatra hafa ny vola miditra, na dia tsy misy vola miditra na fidiram-bola hafa rehetra, ny fitsarana dia manana zo hanorina ny fe-fikojakojana izay no hofany isam-bolana.
Ny maha-zava-dehibe ny azy ireo no nametraka, nivoaka avy ny mety fiarovana ny ny raiki-tampisaka fari-piainana sy ny ara-bola zava-misy ny andaniny sy ny ankilany.
Ao amin'ny hetsika izay amin'ny samy ray aman-dreny dia ireo ankizy, raikitra habetsaky ny vola voaangona ao amin'ny famindram-po ny tsy tsara intsony. Ny avy any ambony, izany dia manaraka fa misy noa habetsahan'ny alimony, ary izany dia napetraky ny fitsarana mba hiarovana ny sasany fitaovana lenta ny ankizy ny fiainana. Mba hamaritana ny toe-draharaha ara-bola, ny fitsarana maka ho any ny kaonty rehetra misy loharanom-bola Ankoatry ny, dia tokony homarihina fa alimony raikitra vola dia nanangona afa-tsy ao ny lamin ny fitsarana. Alimony dia nandoa ny iray amin'ireo ray aman-dreny taloha ny zanany ny fahombiazana eo amin'ny asa ny ankamaroan'ny. Ny trosa amin'ny trosa taorian'ny valo ambin'ny folo taona ihany no afaka ho sitrana eo amin'ny fototry ny mpanatanteraka ny antontan-taratasy navoakan'ny fitsarana ankapobeny fahefana, ny famerana ny fe-potoana izay tsy mihoatra ny telo taona. Ny fanarenana ny alimony noho izany ny fotoana dia atao amin'ny ny fototry ny ara-pitsarana na ny didim-ao anatin'ny telo taona nialoha ny fanolorana ny manan-danja ny mpanatanteraka ny antontan-taratasy.
Fanampiny vs Sampana any Shina
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny roa raharaham-barotra tsy manan-danja, ary mety hisy vokany eo amin'ny fomba izay ny orinasa dia hanatanterakaafaka manome torohevitra manokana mba afaka manao ny tsara indrindra ny raharaham-barotra safidy mifototra amin'ny ny zavatra ilaina. Orinasa mpampiasa vola dia ho afaka ny hanao ny fanapahan-kevitra tsara indrindra ho an'ny ny orinasa indray mandeha izy ireo dia manana ny fahalalana tsara ny mety ho nisokatra iray voasoratra ara-panjakana ao shina tanibe ny orinasa na amin'ny orinasa vahiny izay te-hanorina ny raharaha eo anatrehan'ny ao Shina. Io karazana orinasa tsy manana ny ara-dalàna ny fikambanana ary izany dia tsy miankina amin'ny ray aman-dreny orinasa. Izany dia tsy maintsy hizara ny anaran ny filohan'ny orinasa ary mety ho vita fotsiny amin'ny fampidirana ny teny Shinoa ho ny sampana amin'ny faran'ny ny orinasa ny anarany. Ny sampana dia tsy mila birao ny tale sy ny ray aman-dreny orinasa dia mendrika tanteraka ny trosa ary ny adidy ny Shinoa sampana. Izany be dia be ny madio dia ny lehibe dia samy hafa ara-dalàna ny fikambanana izay ny ray aman-dreny orinasa manana mizara. Ny orinasa roa tsy mila manana anarana sy ny ray aman-dreny orinasa fanaraha-maso dia voafetra ihany ny habetsaky ny share renivohitra vola ao amin'ilay orinasa. Ohatra, dia afaka hanendry na handroaka ny birao ny mpikambana Tanteraka nanana fanampiny ao Shina no manana an-jatony ny share renivohitra fananan'ny ray aman-dreny orinasa. Raha izany no izy, dia ny ray aman-dreny tanteraka orinasa manana fanaraha-maso ny fanampiny. Ny izay tiany indrindra ny raharaham-barotra mila ny mpampiasa vola ao amin'ity firenena ity. Na dia izany aza dia miankin-doha ara-dalàna ny fikambanana, ny tompony ao Shina dia zato Fanohanana ara-dalàna ho afaka nanome ny ekipa ny mpisolovava rehefa manaraka ireto ny tena zavatra takiana ho an'ny sampana fisoratana anarana: toy ny orinasa rehetra, ny Fanekem-Fikambanana dia ny tena antontan-taratasy avy amin'ny orinasa izay tokony ho nandrafitra tamin'ny fotoana sampana fanoratana ny fanambarana attesting ny zava-misy fa ny orinasa vahiny te-hanokatra ny sampana any Shina tokony omena ny fisoratana anarana manam-pahefana Lehibe orinasa avy any ivelany dia afaka manapa-kevitra amin'ny zavatra mihoatra noho ny iray sampana, raha toa ny iray amin'izy ireo dia ny filohan'ny birao ao Shina. Rehetra ny lafiny ara-dalàna dia afaka ny ho tanteraka nanazava ny, dia aza soso-kevitra mba mangataka fanampiana ara-dalàna sy ny firesahana na ny tsy fifankahazoana izay mety hitranga. Toy ny tamin'ny raharaha sampana, ho fanampiny dia afaka hihazakazaka eo ambany ny fitsipi-WFOE raha mbola ny Articles ny Fikambanana ka nanome ny manampahefana. Toy izany koa ny kely indrindra share renivohitra ny RMB, no misy fa raha vao toy ny banky ny vola eo an-toerana dia misokatra. Fanambarana mampiseho fa ny orinasa vahiny te-hametraka dia ampahany ny antontan-taratasy izay tokony ho vonona. Iray fanampiny ilaina mba ho voasoratra ara-panjakana ny hetra tanjona, toy ny ao ny raharaha ny iray sampana. Ny fahasamihafana eo amin'ny sampana sy fanampiny fa ny iray faharoa adiresy kokoa ny orinasa lehibe isan-karazany ny asa. Na izany aza anefa, ny ankamaroan ny sampana dia hita any amin'ny sehatry ny banky, fa tsy voafetra ho amin'izany. Aza misalasala mba hifandray amin'ny raintsika Ny asan'ny sampana azo ampiharina amin'ny fifadian-kanina sy ny fomba ny orinasa afaka haingana hanomboka ny asa eny an-tsena, ary tsy misy tokony hampanahy ny mikasika ny fahazoan-dàlana, toy ireo izay efa napetraka. Ny sampana tsy mila manana ny filankevi-pitantanana, toy ny solontena iray mety ho ampy ho an'ny asa manokana ao amin'ny orinasa. Ny zava-dehibe tombony iray dia ny hoe ny orinasa dia afaka mampandeha ny asa eo ambanin'ny anarana hafa noho ny ray aman-dreny orinasa. Tsy maintsy mampiasa izany anaram-boninahitra toy ny a, ary mihoatra noho izany, dia afaka mametraka ny asa hafa koa. Toy ny fiaraha-mientana ifampizarana ho an'ny tombontsoa, dia milaza fa na ny sampana sy ny sampan'ny orinasa dia mety ho mora foana ny voasoratra ara-panjakana ao Shina, afaka manakarama mpiasa an-toerana sy ny soa avy amin'ny andian-hetra soa. Na dia vitsy ny fombafomba rehefa tonga ny Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny fanohanana ara-dalàna dia ho raisina ho zava-dehibe, indrindra fa ho an'ny vahiny mpandraharaha izay ho an'ny fotoana voalohany ao Shina amin'ny maha-mpandraharaha. Aoka isika hanome anareo ny fanampiana ilaina rehefa izy ireo raha mihevitra ny tsena vaovao mety ho ny mpandraharaha filàna. Amin'ny fivoahana manerana izao tontolo izao sy ny fifandraisana lehibe ara-bola hubs, Shina dia misokatra ho an'ny raharaham-barotra indrindra ny mafy sy nankasitraka sehatra fandraharahana, noho izany, ny tsara indrindra Ny raharaham-barotra ny modely ao Shina dia miankina amin'ny raharaham-barotra ny tanjona sy ny orinasa maniry ny hanorina maharitra tanjona ao Shina. Ny Manomboka amin'ny orinasa iray any Shina dia mety ho sarotra satria tafiditra toy izany sarotra ny fomba fiasa.
Refund - China Airlines
Tsy maintsy efa mifandray amin'ny ny maha-Mpikambana mba fidirana amin'ny tantara ara-tsosialy Tsy maintsy efa mifandray amin'ny ny maha-Mpikambana mba fidirana amin'ny tantara ara-tsosialy Raha tsy izany, miangavy anao Sonia na Good Mpikambana VoalohanyMahomby avy Martsa hatao ny taona, na tapakila dia tsy maintsy ho tsara ihany fiaingana sy fahatongavana station daty fiaramanidina maro famandrihana kilasy(RBD) sy ny tapakila anarana mba hampihatra ho refund amin'ny 'dika mitovy amin'ny tapakila fividianana' antony. Online refund no afa-tsy ho an'ny firenena mikambana dia nampiasa an'ireo tapakila ireo dia vidiana avy amin'ny tranonkala ity. Refund azo ampiharina amin'ny ny andro manaraka ary ao anatin'ny roa taona ny fividianana daty (ora ao an-toerana ny fialan'ny gara). Ny refund vola ho reimbursed ny kaonty maro ampiasaina ao amin'ny fividianana tany am-boalohany. Ireo dia tsy azo ampiharina ho an'ny online refund: ampahany ampiasaina ho tapakila, free loka tapakila, ny tapakila mahakasika ny hafa airlines sy ny tapakila izay mitohy amin'ireo manan-kery Fanampiny Hividy(THSR, Fianakaviana Fandriana, sns.). Mifandraisa amin'ny biraon'ny sampana nandritra ny refund ny fangatahana Ny refund dia nisaina indray ho any amin'ny tany am-boalohany ny fomba fandoavam-bola ao anatin'ny fito andro taorian'ny refund dia ampiharina an-tserasera, fa ny faharetan'ny fanonerana dia iharan'ny karatra-namoaka banky manazava ny fomba fiasa, ary ny refund fanompoana-poana ho nakòn avy amin'ny tany am-boalohany ny be. Tapakila ho avy USA, feno refund tsy misy ny fanompoana poana dia homena raha ny refund ny fangatahana dia atolotra ao anatin'ny valo amby efapolo ora aorian'ny tapakila fividianana sy ny famandrihan-toerana dia nanao ny herinandro iray na maromaro mialoha ny sidina ny voalahatra lasa. Tapakila manomboka avy any Korea, raha ny refund dia atao folo andro na mihoatra ny talohan'ny voalohany fiaramanidina sehatry ny lasa daty, dia mety ho foanana rehefa tsy misy ny fanompoana anjara-raharaha ao anatin'ny fito andro aorian'ny ny fividianana.
Tsy miankina shinoa sekoly ambony
Sinoa tsy miankina sekoly ambony dia karazana tsy miankina amin'ny sekoly ambony any MaleziaManome faharoa ny fanabeazana amin'ny teny Shinoa ho toy ny fitohizan ny kilonga ny fanabeazana amin'ny teny Shinoa-pirenena-karazana sekoly ambaratonga voalohany. Ny mpanelanelana amin'ny tontolo ny fampianarana ao amin'ireo sekoly dia Mandarin miaraka amin'ny endri-tsoratra Sinoa notsorina-tsoratra. Misy tanteraka ny enim-polo Shinoa tsy miankina sekoly ambony ao amin'ny firenena, anisan'izany ny telo amby roa-polo avy any Atsinanan'i Malezia, ary izy ireo no maneho kely maro ny sekoly ambony ao Malezia. Na dia teo aza izany, ny sekoly dia tsy miankina amin'ny tsirairay ary maimaim-poana ny fitantanana ny raharaha. Ny maha-sekoly tsy miankina, ny Shinoa tsy miankina sekoly ambony tsy hahazo famatsiam-bola avy amin'ny governemanta Maleziana, tsy toy ny-pirenena-karazana io.
Na izany aza, araka ny tanjona ny manome takatry ny fampianarana rehetra ao amin'ny teny Sinoa, ny saram-pianarana dia betsaka ambany noho ny hafa ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina.
Ny sekoly dia nitandrina velona saika ihany amin'ny alalan'ny fanomezana avy amin'ny vahoaka. Sinoa sekoly no maha - naorin'i ny foko Shinoa tany Malaya tany am-piandohan'ny taonjato faha. Ny sekoly no nanangana ny tena fikasany dia ny manome fampianarana ny teny Sinoa. Araka izany, ny mpianatra mbola tena Sinoa ny amin'izany andro na ny sekoly ny tenany dia misokatra ho an'ny olona rehetra foko sy fiaviana. Taorian'ny Malezia ny fahaleovantenany tamin'ny, ny governemanta dia nanome baiko rehetra sekoly mba hitolo-batana ny fananana sy ho neken'ny an-Pirenena ny rafi-Pianarana. Niteraka tabataba teo anivon 'ny Sinoa sy ny marimaritra iraisana no tratra tao fa ny sekoly dia tsy ny ho tonga '- Pirenena Type' ny sekoly. Eo ambany toy izany rafitra, ny governemanta no hany miandraikitra ny amin'ny fandaharam-pianarana sy ny fampianarana ny mpiasa raha ny tany dia mbola anisan ny sekoly. Raha Shinoa ny sekoly ambaratonga fototra dia mahazo mitana Shinoa amin'ny maha-mpanelanelana ny fampianarana, Sinoa sekoly ambaratonga faharoa dia tsy maintsy hiova ho amin'ny teny anglisy-mpanelanelana amin'ny tontolo an-tsekoly. Maherin'ny enim-polo sekoly niova fo mba ho tonga Firenena Karazana sekoly, anisan'izany malaza ny sekoly toy ny Chung Ling Sekoly Ambony, Penang Shinoa ny Tovovavy' ny Sekoly ambaratonga faharoa tao Penang Nosy, Jit Fahotana ny Sekoly ambaratonga faharoa, ary Ave Maria Drelijiozy Sekoly Ambony, Sam Tet Sekoly Ambony. Raha ny mpanelanelana amin'ny tontolo teny ho an'ny ankamaroan'ny foto-kevitra dia mifamadika ny malagasy araka ny tolo-kevitra, ny fampianarana sy ny fianarana ny teny Mandarin nijanona tsy maintsy atao ao amin'ireo sekoly, ny ankamaroan'izy ireo dia atolotra ho iray, fara fahakeliny, fahafito ny iray ampahadimin'ny ny fampianarana fotoana isan-kerinandro mba Mandarin fianarana. Io drafitra io dia mbola heverina ho toy ny tsy azo ekena ny marimaritra iraisana eto ny sasany amin'ny teny Shinoa, ary ny vitsy an'isa sy ny Shinoa sekoly nandà ilay tolo-dalàna ary lasa sekoly ambony tsy miankina na tsy miankina Shinoa sekoly ambony satria izy ireo taty aoriana dia antsoina hoe. Izany foto-kevitra izany tsikelikely nahazo laza sy, nandritra ny taona, sy ny taona, maro ny Firenena Karazana-sekoly ambony indray ny tsy miankina sekoly ambony ny sampana.
Ny isa mbola mitombo mandra-pahatongan'ny fe-potoana raha ny toe-draharaha politika eto Malezia no nahatonga azy tsy nametraka fanampiny tsy miankina Shinoa avo ny sekoly.
Amin'izao fotoana izao dia misy enim-polo tsy miankina Shinoa sekoly ambony ao Malezia, anisan'izany Foo Yew Sekoly Ambony izay lehibe indrindra any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ao amin'ny firenena mihoatra ny ireo mpianatra. Foo Yew lycée no sekoly voalohany, mba handà ny governemanta tolo-kevitra, ary koa ny voalohany sekoly ambony mba manana sampana toeram-pianarana (hita ao Kublai). Ny faharoa lehibe indrindra dia Chong Hwa tsy Miankina Sekoly Ambony, Kuala Lumpur, izay fantatra noho ny tsara akademika fampisehoana ary koa ny nahazo loka fampisehoana ao amin'ny inter-tsekoly ny fifaninanana. Tamin'ny, nisy valo ambin'ny folo avo sekoly mampiasa Shinoa amin'ny maha-mpanelanelana ny fampianarana sy ny roa amby roapolo avo sekoly fampianarana ao amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo malagasy ao Sarawak ihany. Ao amin'ny taona, ny Britanika Satro-boninahitra Zanatany izay avy eo amin'ny fanaraha-maso ny Sarawak nanolo-kevitra fa ny valo ambin'ny folo avo sekoly mampiasa Shinoa amin'ny maha-mpanelanelana ny fampianarana ho niova fo mampiasa ny teny anglisy. Tamin'ny, dia nisy ny taratasy nalefa tany rehetra ny Sinoa-amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo avo ny sekoly mangataka azy ireo mba hiova finoana ny fampianarana rehetra foto-kevitra ho amin'ny teny anglisy alohan'ny iray volana aprily. Tsy manao izany, ny sekoly dia tsy azo omena na ny vola natokana avy amin'ny governemanta. Na dia teo aza ny mafy ny fandavana ny Shinoa tao an-toerana ny fiaraha-monina, ny drafitry mbola naka toerana. Amin ny farany, enina sekoly ambony avy amin'ny valo ambin'ny folo tsy nety niova ho fampianarana amin'ny teny anglisy izy ireo ny Chung Hua Sekoly ambaratonga faharoa No, Chung Hua Sekoly ambaratonga faharoa No, Chung Hua Sekoly ambaratonga faharoa No, Gong Ming Sekoly ambaratonga faharoa, Kiang Azy Sekoly ambaratonga faharoa sy ny Kai Dee Sekoly ambaratonga faharoa. Ny sisa amin'ny sekoly izay niova fo ho amin'ny teny anglisy ny mpanelanelana amin'ny tontolo sekoly niafara ho 'Escola Kembangan' rehefa Sarawak nanatevin-daharana Malezia. Tamin'ny taona ireo malagasy mpanelanelana amin'ny tontolo an-tsekoly ireo indray ho niova fo mampiasa ny teny Bahasa Malaysia toy ny mpanelanelana amin'ny tontolo ny fampianarana.
Ny fiaraha-monina Shinoa tsy mbola manohana ny enina sekoly ambony izay nihazona ny fampianarana amin'ny teny Sinoa (naorina tao teo anelanelan'ny taona ary ny taona), izy ireo dia naorina ny valo hafa sekoly ambony eo ka hatramin'ny.
Ireo efatra ambin'ny folo sekoly ambony dia lasa anisan'ny Malezia ny Shinoa tsy miankina amin'ny ambaratonga ambony, ary mbola misy amin'izao fotoana izao. Amin'ny Sabah, rehetra ny sivy Shinoa ny sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana dia niforona tao anelanelan'ny taona sy ny. Matetika ireo mpianatra mandany ny enin-taona eo ny Shinoa tsy Miankina amin'ny Sekoly Ambony. Ny enin-taona dia mizara ho dingana roa: ny telo taona ny zandriny afovoany ary ny telo taona ao ambony afovoany, toy ny sekoly ambaratonga faharoa, ny rafitra ao amin'ny tanibe Shina sy Taiwan. Ny mpianatra dia mirohotra any dian-tongotra toy ny Siansa na ny zava-Kanto ny Varotra ao amin'ny ambony afovoany sehatra. Amin'ny faran'ny ny dingana tsirairay, ny mpianatra mipetraka ho Tafaray Fandinihana Taratasy fanamarinana (UEC). Misy sekoly vitsivitsy manolotra taona fanampiny ao ambony afovoany, ho an'ireo mpianatra maka ny governemanta Sigil Tinggi Pelajaran Malezia (STPM, mitovy Ny haavon'ny). Sinoa tsy miankina sekoly ambony mampiasa izany taom-pianarana toy ny sekolim-panjakana. Taom-pianarana iray dia ahitana ny roa semesters: enim-bolana iray avy janoary ho May sy enim-bolana, roa avy jiona hatramin'ny novambra, miaraka ny fanadinana any amin'ny tapitra ny isan-enim-bolana. Amin'ny ankapobeny akademika fampisehoana ny mpianatra amin'ny taom-pianarana iray no mamaritra ny ny fampiroboroboana ny manaraka fianarana amin'ny taona manaraka taom-pianarana ity. Matetika, tsy ho nampirisika nandritra ny roa taona misesy vokatry ny fandroahana. Mifanohitra amin'izany kosa, ireo mpianatra ao amin'ny sekolim-panjakana dia tonga dia nampirisika na inona na inona fianarana ambony zava-bitany. Ny fandaharam-pianarana ampiasaina amin'ny teny Sinoa tsy miankina sekoly ambony dia mandroso sy narindra tamin'ny alalan'ny fandaharam-Pianarana Departemantan'ny UCSCAM momba ny fanabeazana ambaratonga faharoa fandaharam-pianarana indrindra manerana izao tontolo izao, indrindra fa ao Malezia-pirenena faharoa fandaharam-pampianarana sy ny an'ireo ao amin'ny tanibe Shina ihany koa ho an'i Taiwan. UCSCAM mamoaka boky fianarana ho ampiasaina amin'ny teny Sinoa tsy miankina sekoly ambony.
Ny Miray Fandinihana Taratasy fanamarinana (UEC) dia standardised fitsapana ho an'ny tsy miankina Shinoa mpianatra sekoly ambony nokarakarain'ny UCSCAM hatramin'ny.
Ny UEC dia hita amin'ny ambaratonga telo: Junior Afovoany (UEC-JML), Arak'asa (UEC-V), ary ny Zokiolona ao Afovoany (UEC-SML).
Ny fanadinana ho an'ny tsy-teny foto-kevitra ao amin'ny UEC-JML (afa-tsy ao Sabah) sy UEC-V ireo amin'ny teny Sinoa. Amin'ny Sabah, UEC-JML siansa sy ny kajy dia hita eo amin'ny Sinoa sy malagasy Ny UEC-SML dia fanadinana ho an'ny matematika, siansa (toe-batan'ny, sy ny fizika simia), ny boky fitandremana, fitantanam-bola, sy ny varotra misy amin'ny Sinoa sy ny malagasy, raha ny hafa tsy ny fiteny ny foto-kevitra ireo ihany no hita amin'ny teny Sinoa.
Ny UEC-SML dia ekena ho toy ny fahaizana ny fidirana ho maro fahatelon'ny ireo toeram-panabeazana manerana izao tontolo izao, isan'izany ny any angletera, Etazonia, Taiwan, Hong Kong, Chine, Singapore, Aostralia, Kanada, ary ny maro hafa.
Izany dia tsy eken'ny governemanta ao Malezia ho an'ny fidirana ao an-bahoaka ny anjerimanontolo, saingy tsy miankina indrindra amin'ny kolejy manaiky izany.
Satria ny UEC dia tsy eken'ny governemanta Maleziana, ny sasany Shinoa ny sekoly ambony tsy miankina nisafidy ny hampianatra ny firenena ny sekoly ambaratonga faharoa ny fandaharam-pianarana (amin'ny teny Malay) miaraka amin'ny sekoly tsy miankina ny fandaharam-pianarana (amin'ny teny Sinoa), ary mitaky ireo mpianatra mba hipetraka ho an'ny governemanta standardised fitsapana (PMR, SPM na STPM) toy ny sekoly tsy miankina ny kandidà, ary manome ny mpianatra ny fahafahana hahazo ny governemanta fantatra amin'ny taratasy fanamarinana. Sinoa educationalist Dr Kua Kia Soong milaza ny fampidirana ny UEC ao amin'ny boky Protean Saga: Ny Sinoa, ny Sekoly any Malezia. Araka ny boky, ny fampidirana ny UEC nitarika ny Dr Mahathir Mohamad, dia ny Minisitry ny Fampianarana ary taty aoriana dia nilaza ny Praiminisitra ao Malezia, ny fampiantsoana ny Shinoa educationalists ny parlemanta. Mitanisa ny boky, 'Ny farany (Mahathir) dia tsy nitsitsy ny teniny saingy nilaza ny Dong Jiao Zong mpitarika fa UEC efa tsara tsy azo natao na ny olon-kafa. Tsy mangataka izy, na inona na inona valin-ary nitsipaka ny Shinoa educationalists amin'ny curt. 'izay rehetra' Tamin'ny volana Mey -Pirenena Fankatoavana Board (LAN) takiana ny mpianatra hiditra ao an-toerana tsy miankina amin'ny kolejy mampiasa na fahaizana hafa noho ny SPM-nitranga ny SPM Zavatra taratasy. Izany nisarika hetsi-panoherana sy ny vokatry ny dia ny Minisitry ny Fampianarana Ambony Dr Shafie Salleh afahana UEC mpianatra avy izany fepetra. Maro an'isa ny Shinoa tsy Miankina Sekoly Ambony dia mampiasa ny Teny toy ny fitaovana ny fampianarana. Ny fomba ofisialy ny boky voasoratra amin'ny teny Mandarin sy ny fanadinana taratasy dia napetraka ao Mandarin. Na izany aza, misy ihany koa ny maro ny sekoly fa mandroso malagasy ny fampianarana ny fitaovana sy ny fampiasana ny teny anglisy ho mpanelanelana amin'ny tontolo ny fampianarana.
Ny Ratra manokana ny mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Shina ho an'ny Isan-Tanàna
Voalambolambo sy matihanina, ny mafy tanteraka ny ekipa
Ny ratra manokana amin'ny lalàna dia manondro ny ara-dalàna fanafody sy ny fiarovana tafiditra ao an-trano fitoriana nitondra vokatry ny wrongful fitondran-tena
Raha ny marina, ny teny hoe"takelaka"dia avy amin'ny teny latina midika hoe manova, ny ratsy, na ny ratsy.
Mifanohitra amin'ny lalàna mifehy ny heloka bevava, ny takelaka asa tsy anjara ny governemanta manameloka ny wrongdoer. Ny marimarina kokoa, ireo toe-javatra mahakasika ny tsy miankina mpitory mitady tambin-karama (matetika vola) ho an'ny voka-dratsy nateraky ny voampanga ny asa. Boase Cohen Collins naorin'ny Melville Boase sy Colin Cohen tamin'ny. Nanomboka tamin'izay, izany no ho mafy orina toy ny mitarika ny tsy miankina ny fanompoana manontolo Lalàna Mafy fitaovana amin'ny Hong Kong ny fahalalana sy ny global tonga. Lalàna Hentitra ny indray mitopy maso Niorina tamin'ny taona, Lawman Mpiara-miasa dia professional FDI sy ny varotra Lalàna Mafy monina any Shenzhen, any Shina. Lawman Mpiara-miasa dia be traikefa sy fahalalana ny amin'ny hazo Fijaliana - sisintany Fampiasam-bola, ny Orinasa, ny Varotra Iraisam-pirenena, sy ny Fananana ara-Tsaina. Lalàna Hentitra ny Topimaso ny Fanekem-maimaim-Poana Midinika ny Kisendrasendra Saran'ny Carte Karatra Furong Lalàna Mafy manome feno ara-dalàna ny tolotra avy amin'ny birao ao Guangzhou, ary Shenzhen izany. Dia manaraka ny fomban-drazana sy ny fototry ny asa momba ny fitsipiky ny fahamarinan-toetra, tsara, aza tia tena, sy ny andraikitra. Ara-dalàna ny sampan-draharaha ny Furong Lalàna Mafy ahitana ny Governemanta ara-Dalàna. Hafa Birao: Changsha, Shenzhen Lalàna Mafy ny topy maso maimaim-Poana Midinika ny Kisendrasendra Saran'ny Carte Karatra Tianjin Bozhuan Lalàna Mafy dia hita ao Tianjin, Shina. Nandritra ny folo taona farany, ny tena manan-talenta ny mpisolovava nanome ara-dalàna ny asa an'arivony ny mpanjifa, miainga amin'ny orinasa iraisam-pirenena, mandatsa-dranomaso sy ny menaka ny tetikasa, ary ny fampiasam-bola vahiny mba tsy mitady tombom-barotra ny fikambanana, ny governemanta. Lalàna Hentitra ny Topimaso ny Fanekem-maimaim-Poana Midinika ny Kisendrasendra Saran'ny Yingke dia ny fanompoana manontolo, ny Lalàna iraisam-pirenena Hentitra, miaraka amin'ny foiben-toerany any Beijing.
Niorina tamin'ny taona, Yingke Lalàna Mafy efa nametraka ny laza ao anatin'ny teny Sinoa ara-dalàna ny asa-tsena.
Maherin'ny ireo mpisolovava, isika ankehitriny, iray amin'ireo lehibe indrindra ny Orinasa Lalàna tao Azia ary.
Mandray toromarika avy ao an-toerana
Hafa Birao: ao Guangzhou, Tianjin Lalàna Mafy ny Fifampidinihana Karatra Shina Lalàna momba ny Fanompoana (Wuhan) Voafetra dia fanta-daza ny Lalàna Mafy fahazoan-dalana mba hanomezana ara-dalàna sy consulting services ao Shina. Ny ara-dalàna ekipa manana in-lalina ny fahatakaran-javatra sy ny fahalalana ny faritra ara-dalàna ny kolontsaina sy ny tsena fihetsehana. Miaraka mihoatra noho ny roa-polo taona ny fampiharana ny lalàna ao Shina, ny. Lalàna Hentitra ny topy maso maimaim-Poana Midinika ny Kisendrasendra Saran'ny Angela Wang Mpiara. dia ny raharaham-barotra-nifantoka fanao amin'ny anjara fanompoana ao Hong Kong sy Shanghai. Isika dia manome tena ara-dalàna ny fahaiza-manao ho an'ny raharaham-barotra amin'ny azo ekena ny vidiny. Ny ekipa ny mpisolovava mandany ny famoronana sy ny vahaolana azo ampiharina matetika ny olana sarotra. Hafa Birao: Shanghai Lalàna Mafy ny topy maso Lahatsoratra MC Lalàna Mafy dia mifototra ao Makaô fantatra ihany koa ho toy ny teo aloha Miguel Cravo Lalàna Mafy. Ny mafy orina ao Makaô hatramin'ny taona, ary efa manome ny tena be dia be isan-karazany ny ara-dalàna ny asa eo an-toerana sy ny mpanjifa iraisam-pirenena. Ny asa handrakotra ny faritra toy ny Banky ny fitantanam-Bola, ara-Barotra. Lalàna Hentitra ny topy maso Masson de Morfontaine ao Hong Kong sy Shanghai manome an-tampon'ny-tsara ny hetra sy ny raharaham-barotra torohevitra ho an'ny orinasa, ny fikambanana ara-bola sy ny olona. Isika dia manome ny mpanjifa amin'ny toro-hevitra maro isan-karazany ny hetra sy ny raharaham-barotra ny faritra, anisan'izany ny fampiasam-bola, M Ny varotra, real estate, famindrana. Hafa Birao: Shanghai Lalàna Mafy ny topy maso Lahatsoratra Lahatsary Paul K. Chan Mpiara-miasa dia miorina any Hong Kong, Chine ary manome isan-karazany ny ara-dalàna ny asa. Tena faritra ny fomba ahitana asa Fanorenana sy ara-Barotra Fifandirana, Orinasa sy ny Lalàna ara-Barotra, ara-Tsaina ny Fananana, ny Orinasa Fitantanam-bola sy ny Fiarovana, ny fifindra-Monina, ny Toetrany. Lalàna Hentitra ny Topimaso ao Shanghai no lehibe indrindra ao Shina tanàna sy ny foiben'ny varotra sy ny fitantanam-bola. Armstrong Teasdale efa any Shina hatramin'ny taona.
Lalàna Hentitra ny topy maso McDermott Dia Emery no stratejika mifanaraka amin'ny MWE Shina Lalàna Birao mba hanomezana feno isan-karazany ny ara-dalàna ny asa sy ny raharaham-barotra torohevitra ireo orinasa Shinoa sy orinasa iraisam-pirenena manao raharaham-barotra amin'ny Shina.
Avy amin'ny Shanghai birao, MWE Shina Lalàna manolotra isan-karazany ny sehatry ny traikefa. Lalàna Hentitra ny topy maso tsy Tapaka fantatra amin'ny maha-mpitarika ao amin'ny faritra, Baker McKenzie efa nanao raharaham-barotra any Hong Kong nandritra ny efa ho efa-polo taona.
Anisan'ny Mafy ny malaza ao Shina ny fomba fanao, ny ekipa mihoatra ny telon-jato mpisolovava manana ny lalina eo an-toerana ny fakany, ary ny fampidirana ny global tonga hanampy an-toerana.
Hafa Birao: ao Beijing, Shanghai Lalàna Mafy ny topy maso Curtis nanokatra ny biraony ao Beijing tamin'ny fiandohan'ny taona mba hanomezana ara-dalàna ny asa ny mpanjifa miasa na any Shina sy Azia Atsinanana. Ny Ny biraony ao Beijing mandrindra akaiky amin'ny mafy ny birao hafa tany Etazonia, ny Vondrona Eoropeana, Amerika latina, Afovoany-Atsinanana sy Afovoany. Lalàna Hentitra ny topy maso Kaye Scholer ny birao dia manolotra feno isan-karazany ny ara-dalàna ny asa ny orinasa teknolojia sy ny tsy miankina ny fampiasam-bola amin'ny orinasa. Avy sarotra ny fananana ara-tsaina ireo olana mahakasika ny patanty, ny zon'ny mpamorona, ny famantarana sy ny varotra zava-miafina momba ny rindrambaiko, fitaovana elektronika, solosaina, fitaovana elektronika, ny fialam-boly. Lalàna Hentitra ny topy maso Gibson Dunn ao Hong Kong birao dia mifantoka amin'ny miampita sisintany varotra, ary koa ny orinasa fanarahan-dalàna, ny fitsipika sy ny famotorana. Ny Hong Kong birao, miaraka amin'ny mafy ny Singapore birao, manana ny fahaiza-manao mba hiatrehana ny sarotra indrindra sy mitana ny varotra na aiza na aiza.
Hafa Birao: ao Beijing Lalàna Mafy ny topy maso Dechert mpisolovava ao Hong Kong tsy hanome ny vokatra-mirona ara-dalàna sy ny raharaham-barotra vahaolana amin'ny orinasa sy ny vola vola ao Shina sy ny Sinoa sampana mikasa stratejika ivelany ny fampiasam-bola.
Mpanjifa miantehitra amin'ny fahatakarana lalina ny raharaham-barotra ao an-toerana sy ny didy amam-pitsipika ny fomba fanao ao Shina. Hafa Birao: ao Beijing Lalàna Mafy ny topy maso Freshfields Bruckhaus Deringer LLP no mpitarika eo anivon ny Lalàna iraisam-pirenena Orinasa, ny fanomezana ny raharaham-barotra ny lalàna momba ny toro-hevitra ny kalitao ambony indrindra nanerana an'i Eoropa, ny Afovoany Atsinanana, Azia sy ny ANTSIKA. Maherin'ny, diman-jato mpisolovava ao fito amby roa-polo manan-danja-barotra foibe maneran-tany, dia manome feno. Hafa Birao: ao Hong Kong, Shangai Lalàna Mafy ny topy maso Wang, Hartmann, Gibbs Cauley, P. F, dia za-draharaha Lalàna Mafy monina ao Newport Beach any Californie. Efa fanampiny anjara fanompoana ao Taiwan, ny Beijing, ary ny Tendrombohitra View, California. Ny tanjonay dia ny hanome azo ampiharina sy lafo-mahomby ny vahaolana mifanaraka amin'ny lalàna ilain'ny orinasa roa. Lalàna Hentitra ny topy maso Simpson Thacher Bartlett LLP manome voarindra ara-dalàna ny toro-hevitra sy ny fanehoana ny sasantsasany amin'ireo lehibe indrindra sy tena sarotra transactional-pitsarana sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao.
Ny foiben'ny birao tao New York City miasa amin'ny voizin'olon-droa amin ny anjara fanompoana ao Beijing i Hong Kong, Londres, Los.
Hafa Birao: ao Hong Kong ny Lalàna Mafy ny topy maso Orrick nahatonga ny lazany ho ny toetra amam-panahy, ny fahamarinana, ny fahafahana, sy ny fandraisana ny fanahy ny mpisolo vava sy ny mpiasa, manomboka amin'ny mpanorina Jarboe, Goodfellow, Eells, ary Orrick, ary mitohy mandraka androany. Ny fahaizana amin'ny vahoaka ny fitantanam-bola sy ny orinasa lalàna taho avy ny seminal. Hafa Birao: ao Hong Kong, Shangai Lalàna Mafy ny topy maso Grandall Lalàna Mafy dia mitarika ny fanompoana manontolo Shinoa orinasa sy ny ara-barotra ny Lalàna Mafy amin'ny folo birao manerana an'i Shina, stratejika hita eo ny fampiasam-bola lehibe foibe any Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Guangzhou, Kunming, Tianjin, Chengdu, Ningbo sy Fuzhou, ary koa ny. Hafa Birao: ao Beijing, Chengdu, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Kunming, Ningbo, Shenzhen, Tianjin Lalàna Mafy ny topy maso Naorina tamin'ny taona, LPA efa mandeha amin'izao fotoana izao mihoatra ny mpisolovava amin'ny roa anjara fanompoana ao Paris sy Hong Kong. LPA mpisolovava' ny manam-pahaizana fahalalana ny maro ny manam-pahaizana manokana ny faritra dia manome fahafahana azy ireo mba hiatrehana ny tena isan-karazany ny mpanjifa' zavatra takiana.
LPA ny tena sehatry ny asa dia ny Fananana ny Lalàna.
Hafa Birao: ao Guangzhou, Shanghai Lalàna Mafy ny topy maso Ashurst dia mitarika ny Lalàna iraisam-pirenena Hentitra nanoro hevitra vondron'orinasa, ara-bola ny andrim-panjakana ary ny governemanta. Ny fototry ny raharaham-barotra ao amin'ny orinasa, ny fitantanam-bola, fifandirana fanapahan-kevitra, ary ny fampandrosoana sy ny famatsiam-bola ny fananany ny hery, ny harena ary ny foto-drafitrasa sehatra. Hafa Birao: Shanghai Lalàna Mafy ny Ankapobeny ankoatry ny mba ho ekena toy ny tsena mpitarika ao amin'ny Azia-Pasifika, faha- lehibe indrindra ara-dalàna ny vondrona ao amin'ny izao tontolo izao sy ny manan-danja momba ny mpitarika ny multinationals sy ny Harena diman-jato orinasa, ny vahoaka efa tsy miankina fantatra eto amin'izao tontolo izao mialoha ny mpisolovava malaza. Ny fahombiazana Hafa Birao: Shanghai Lalàna Mafy ny indray mitopy maso.
Shinoa ny fandikan-Teny ho an'ny Subpoena
Luật di trú, công Ty Luật ở Trung hoa cho Mỗi thành Phố